January 2018 – myanmar news
​ကွမ်းရွက်ရဲ့ ဆေးအစွမ်း နဲ့ အသုံးပြုပုံတွေ
ကှမျးရှကျရဲ့ဆေးဖကျဝငျပုံအကွောငျးကိုတော့ စာဖတျသူတို့လညျး တျောတျောမြားမြားသိပွီးလောကျပွီထငျပါတယျ။ ကှမျးရှကျနဲ့ ဆေးအမြိုးမြိုး ဖျောစပျအသုံးပွုကွရာမှာ ဒီနမှေ့ာတော့ ကှမျးရှကျရဲ့ ဆေးဖကျဝငျပုံလေးကို နညျးနညျးလေး မြှဝေပေးခငျြပါတယျ။
ကှမျးရှကျကို ထမငျးစားပွီး ဝါးပေးမယျဆိုရငျ ခံတှငျးနံ့ နံတာကိုသကျသာစပွေီး အစာမကွတောကို သကျသာစပေါတယျ။ ကှမျးရှကျပွုတျရညျကိုသောကျပေးမယျဆိုရငျတော့ ခံတှငျးရောဂါအမြိုးမြိုး ကိုသကျသာစပွေီး၊ ၀မျးခြုပျတာကိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။ (ကှမျးကိုရိုးရိုးဝါးပေးရမှာပါ။ တခွား ဆေးတှမေထညျ့ရပါဘူး။)
ကှမျးရှကျကို ကွိတျပွီး အရညျညှဈလိုကျပါ။ ရလာတဲ့ အရညျအနညျးယျကို ရနှေေးနဲ့ ရောပွီး ပလုတျကငျြးလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျလညျပငျးနာတာကို သကျသာပြောကျကငျးစမှောဖွဈပါတယျ။
အစာအိမျနာတဲ့သူတှအေနနေဲ့ ကှမျးရှကျပျေါမှာ ကွကျဆူဆီ (သို့) အုနျးဆီကို သုတျလိမျးပေးပွီး အပူပေးပါ။ နှေးရုံပဲအပူပေးရမှာဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျ ၀မျးဗိုကျမှာကပျထားပေးပါ။ ဒါဆိုရငျ အစာအိမျနာတာကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။ ကလေးငယျတှကေိုလညျး လုပျပေးလို့ရပါတယျ။
ကှမျးရှကျပျေါမှာ မုနျညှငျးဆီသုတျလိမျးပေးပွီး အရှကျကို ပူနှေးအောငျကငျပါ။ အေးအောငျထားပွီးရငျ ရငျဘတျပျေါကပျပေးပါ။ ခြောငျးဆိုတာနဲ့ တခွားအဆုတျနဲ့ဆိုငျတဲ့ အသကျရှုမ၀တဲ့ဝေဒနာတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစပေါတယျ။
ကှမျးရှကျကို အစာအိမျခဉျြပေါကျတတျသူတှေ၊ အစာအိမျနာတတျသူတှေ ၊ အငျပဉျြရှိသူတှေ ၊မကွာခဏ ခေါငျးတခွမျးကိုကျသူတှေ၊ တီဘီရှိတဲ့သူတှေ၊ ၀ကျရူးပွနျတဲ့သူတှေ တခွားစိတျရောဂါရှိသူတှေ မစားသငျ့ပါဘူး။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ကွမ်းရွက်ရဲ့ ဆေးအစွမ်း နဲ့ အသုံးပြုပုံတွေ
ထနျးလကျြ ကပေးသော ကနျြးမာရေး အာနိသငျမြား
မွနျမာ့ရိုးရာစားစရာ ထနျးလကျြနှငျ့ ကနျြးမာရေး အာနိသငျမြား
(၁) နစေ့ဉျ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ သှေး သားကို သနျ့စငျစသေညျ။
(၂) အစာကွစေပွေီး အခြိုစားလိုစိတျ ရုတျတရကျဖွဈလာတတျသောအခါ မြိုးတှငျ ထနျးလကျြကို သတိရလိုကျ ပါ။
(၃) ထနျးလကျြကို ဂငျြးနှငျ့ရော၍ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ အဆဈအမွဈနာကငျြ ခွငျးကို သကျသာစပွေီး အဆဈမြား ခိုငျမာလာစသေညျ။
(၄) စားသုံးခွငျးဖွငျ့ အသားအရနှေငျ့ ဆံပငျကနျြးမာစပွေီး မကျြနှာပျေါတှငျ ဝကျခွံ၊ အမညျးကှကျမြားထှကျခွငျး ကို ဟနျ့တားပေးနိုငျသညျ။
(၅) နစေ့ဉျ ထနျးလကျြရညျ စားပှဲဇှနျး(၁)ဇှနျး သောကျခွငျးဖွငျ့ အမြိုးသမီး မြား လစဉျဓမ်မတာမလာမီ ဝမျးဗိုကျ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးကို သကျသာစေ သညျ။
(၆) ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမြားတှငျ ကိုယျဝနျလှယျခြိနျ၌ ဖွဈတတျသော သှေးအားနညျးရောဂါကို ကာကှယျ နိုငျသညျ။
(၁) အဆုတျပှ၊ ပနျးနာရောဂါအတှကျ နှမျးနကျဖွငျ့ စားသုံးပါ။
(၂) အားနညျးခွငျးအတှကျ ထနျးလကျြ စားပှဲဇှနျး (၁)ဇှနျးတဈနေ့ (၂)ကွိမျ စားပါ။
(၃)ွှကကျသားမြားသနျစှမျးစရေနျ နို့နှငျ့ ရောသောကျပါ။
(၄) မောပနျးခွငျးအတှကျ တဈနေ့ လြှငျ ထနျးလကျြစားပှဲဇှနျး(၁) ဇှနျး သောကျပါ။
(၅) လစဉျ ဓမ်မတာလာစဉျနှငျ့ မလာမီ ဖွဈတတျသော နာကငျြမှုမြားအတှကျ တဈနလြေှ့ငျစားပှဲဇှနျး(၁)ဇှနျး သောကျပါ။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ထန်းလျက် ကပေးသော ကျန်းမာရေး အာနိသင်များ
​ရခိုင်ပြည်ထဲသို့ ဘင်္ဂါလီများ ဘာ​ကြောင့်စိမ့်ဝင်နေကြပါသလဲ။
ပထမဦးဆုံး ဒီအကြောင်းကို မပြောခင်မှာ​2050 နှစ်
ရောက်တာနဲ့ ပင်လယ်ရေအောက်​ရောက်သွားမဲ့ နိုင်ငံ( ၈ )နိုင်ငံအကြောင်းကိုအရင်ပြောပါရစေ ။
၄။ ​မော်လဒိုက် ကျွန်းစုများ
၈။ ကီရိဘာတီ နိုင်ငံတို့သည် 2050 ​နှစ်ရောက်​တာနဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်ကို အလိုလိုရာက်သွားမဲ့
အဓိက ပြောချင်တာက အထက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံပါအကြောင်းကတော့ လုံးဝသတိထားရမဲ့
အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သဘာဝကပ်ဘေး
ပါဝင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က သဘာဝကပ်ဘေးဒုက္ခ
ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဟာတနေ့တခြား တိုးတက်များပြားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး
ထိန်းသိမ်းမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်မှု မရှိတဲ့အပြင်
ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာ ဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ အနေအထားကို
ကမ္ဘာ့အဆိုးဝါးဆုံး စံချိန်တင်​ရေကြီးမှုကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ပြည်သူတွေဟာနောက်ဆက်တွဲ သဘာဝကပ်ဘေးတွေကြောင့်ခုချိန်ထိ နလံမထူနိုင်ကြသေးပါဘူး။
ဗြဟ္မပုတြမြစ်နဲ့ တခြားမြစ်နှစ်စင်းကိုမှီခိုနေကြတဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ဒီရေကြီးမှုကြောင့်ကီလိုမီတာ( ၉၇၀၀ )ရှည်လျှားတဲ့ လမ်းတွေဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီး အိမ်ခြေပေါင်း( ၃ )သိန်းကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အပြင်(၂၇၀၀ )ကီလိုမီတာ ရှည်လျှားတဲ့မြစ်ကမ်းဘေးတလျှောက် လူတစ်ထောင်ကျော်သေဆုံးပြီး လူသန်း (၃၀) ​လောက်ကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘ၀ ရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်းတစ်သိန်း လေးသောင်းကျော် ထိ သေဆုံးခဲ့ရပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆိုင်ကလုန်း မုန်​တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်
လူအမြောက်အမြား ထပ်မံသေဆုံးပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသော ဒေသခံတွေဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဘ၀ကို ရောက်ရှိနေရပါတယ်။
သဘာဝကပ်ဘေး ဒုက္ခသည် အများဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရပါတယ်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအပြင် ပင်လယ်ကမ်းစပ်အနီးတ၀ိုက်ဒေသတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလိုလေဆင်နှာမောင်းတွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခတ်လို့လူသေဆုံးမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
လူဦးရေ ထူထပ်များပြားလာမှုနဲ့သဘာဝသယံဇာတ နည်းပါးမှုကြောင့်ပြည်သူအများစုဟာ နေ့စဉ် ​လောင်စသုံးစွဲမှုအဖြစ် သစ်တောတွေကို အားကိုးအားထားပြုနေရတဲ့ အချက်ကလည်း ပြုန်းတီးမှုတွေကိုဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ရာသီဥတု​ဖောက်ပြန်မှု ပိုပိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေတွေကို ဦးတည်စေတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရဲ့ကုန်းမြေအများစုဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပျှမ်းမျှအမြင့်ပေ( ၃၉. ၄ ​ပေ)( ၁၂မီတာ) ပိုမိုနည်းပါးပြီးတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်​
(၁) မီတာ( ၃.၂၈ ​ပေ ) တက်လာတိုင်းအဲဒီကုန်းမြေပမာဏ စုစုပေါင်းရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရေလွှမ်းမိုးခံရမယ့်အနေအထားမှာ
သစ်တောပြုန်းတီးမှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းအပူချိန် နှစ်စဉ်တိုးတက်လာပြီးဒီလိုမျိုးသာ ဆက်လက် တိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်
လာမယ့်( ၂၀၇၅ )ခုနှစ်မှာ မိုးရေချိန်( ၅၈၈.၆၅)မီလီမီတာရှိတဲ့ မိုးကြီးမျိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးဧရာမ ​ရေကြီးမှုတွေနဲ့ အတူပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ( ၄ )မီတာကနေ( ၇. ၈ )မီတာအထိ မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးတော့ဒေသတွင်းက ရေချိုမြစ်တွေဆီကို
ပင်လယ်ဆားငံရေများ ၀င်ရောက်ကာသောက်သုံးရေရှားပါးမှု၊ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနဲ့ရောဂါဘယထူပြောမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း( ၆၈ )သန်း အထိဟာ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရမယ့် အလားအလာ ရှိနေပါတယ်​။
ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေဟာ ယခုကတည်းကနောင်တစ်ချိန်မှာ ပျောက်ကွယ်တော့မယ်ဆိုတာကြိုသိတဲ့အတွက် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကိုအမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ခိုးဝင်လာကြာတာဟာအိမ်ရှင်နိုင်ငံတွေအတွက် အလွန်​စွာမှစိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ….
ရခိုငျပွညျထဲသို့ ဘင်ျဂါလီမြား ဘာ​ကွောငျ့စိမျ့ဝငျနကွေပါသလဲ။
ပထမဦးဆုံး ဒီအကွောငျးကို မပွောခငျမှာ​2050 နှဈ
ရောကျတာနဲ့ ပငျလယျရအေောကျ​ရောကျသှားမဲ့ နိုငျငံ( ၈ )နိုငျငံအကွောငျးကိုအရငျပွောပါရစေ ။
၄။ ​မျောလဒိုကျ ကြှနျးစုမြား
၈။ ကီရိဘာတီ နိုငျငံတို့သညျ 2050 ​နှဈရောကျ​တာနဲ့ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအောကျကို အလိုလိုရာကျသှားမဲ့
အဓိက ပွောခငျြတာက အထကျမှာတငျပွခဲ့တဲ့နိုငျငံတှထေဲမှာမှ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့အိမျနီးခငျြးနိုငျငံဖွဈတဲ့ ဘင်ျဂလားနိုငျငံပါအကွောငျးကတော့ လုံးဝသတိထားရမဲ့
အခကျြဖွဈပါတယျ။ ကမျဘာပျေါမှာ သဘာဝကပျဘေး
ပါဝငျနပေါတယျ။ ကမျဘာပျေါက သဘာဝကပျဘေးဒုက်ခ
ခံစားနရေတဲ့ နိုငျငံတှထေဲမှာ တဈခုအပါအ၀ငျဖွဈတဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံဟာတနတေ့ခွား တိုးတကျမြားပွားလာနတေဲ့လူဦးရနေဲ့ တိုငျးပွညျဖှံ့ဖွိုး
ထိနျးသိမျးမှုကို ထိထိရောကျရောကျကိုငျတှယျဖွရှေငျးနိုငျမှု မရှိတဲ့အပွငျ
ဆယျစုနှဈအနညျးငယျကာလမှာ ဒီထကျပိုမိုဆိုးရှားတဲ့ ဘေးဒုက်ခတှကွေုံတှလေ့ာနိုငျတဲ့ အနအေထားကို
ကမျဘာ့အဆိုးဝါးဆုံး စံခြိနျတငျ​ရကွေီးမှုကို ၁၉၉၈ ခုနှဈမှာ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ ပွညျသူတှဟောနောကျဆကျတှဲ သဘာဝကပျဘေးတှကွေောငျ့ခုခြိနျထိ နလံမထူနိုငျကွသေးပါဘူး။
ဗွဟ်မပုတွမွဈနဲ့ တခွားမွဈနှဈစငျးကိုမှီခိုနကွေတဲ့ ဒသေခံတှဟော ဒီရကွေီးမှုကွောငျ့ကီလိုမီတာ( ၉၇၀၀ )ရှညျလြှားတဲ့ လမျးတှဖေကျြဆီးခံလိုကျရပွီး အိမျခွပေေါငျး( ၃ )သိနျးကြျော ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အပွငျ(၂၇၀၀ )ကီလိုမီတာ ရှညျလြှားတဲ့မွဈကမျးဘေးတလြှောကျ လူတဈထောငျကြျောသဆေုံးပွီး လူသနျး (၃၀) ​လောကျကအိုးမဲ့အိမျမဲ့ဘ၀ ရောကျသှားခဲ့ရပါတယျ။
၁၉၉၁ ခုနှဈမှာ တိုကျခတျခဲ့တဲ့ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျးကွောငျ့ လူပေါငျးတဈသိနျး လေးသောငျးကြျော ထိ သဆေုံးခဲ့ရပွီးနှဈစဉျနှဈတိုငျး ဆိုငျကလုနျး မုနျ​တိုငျးဝငျရောကျတိုကျခတျမှုကွောငျ့
လူအမွောကျအမွား ထပျမံသဆေုံးပွီးထောငျပေါငျးမြားစှာသော ဒသေခံတှဟောအိုးမဲ့အိမျမဲ့ ဘ၀ကို ရောကျရှိနရေပါတယျ။
သဘာဝကပျဘေး ဒုက်ခသညျ အမြားဆုံးနိုငျငံတဈခုအဖွဈ သတျမှတျခွငျးခံထားရပါတယျ။
ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျးအပွငျ ပငျလယျကမျးစပျအနီးတ၀ိုကျဒသေတှမှော မကွာခဏဆိုသလိုလဆေငျနှာမောငျးတှေ ၀ငျရောကျတိုကျခတျလို့လူသဆေုံးမှုတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။
လူဦးရေ ထူထပျမြားပွားလာမှုနဲ့သဘာဝသယံဇာတ နညျးပါးမှုကွောငျ့ပွညျသူအမြားစုဟာ နစေ့ဉျ ​လောငျစသုံးစှဲမှုအဖွဈ သဈတောတှကေို အားကိုးအားထားပွုနရေတဲ့ အခကျြကလညျး ပွုနျးတီးမှုတှကေိုဆကျတိုကျဖွဈပျေါစပွေီး ရာသီဥတု​ဖောကျပွနျမှု ပိုပိုဖွဈပျေါစပေါတယျ။
အဆိုးဝါးဆုံး အခွအေနတှေကေို ဦးတညျစတေဲ့အခကျြတဈခုကတော့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံရဲ့ကုနျးမွအေမြားစုဟာ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအထကျ ပြှမျးမြှအမွငျ့ပေ( ၃၉. ၄ ​ပေ)( ၁၂မီတာ) ပိုမိုနညျးပါးပွီးတော့ ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျ​
(၁) မီတာ( ၃.၂၈ ​ပေ ) တကျလာတိုငျးအဲဒီကုနျးမွပေမာဏ စုစုပေါငျးရဲ့ဆယျရာခိုငျနှုနျးဟာ ရလှေမျးမိုးခံရမယျ့အနအေထားမှာ
သဈတောပွုနျးတီးမှုတှကွေောငျ့ဒသေတှငျးအပူခြိနျ နှဈစဉျတိုးတကျလာပွီးဒီလိုမြိုးသာ ဆကျလကျ တိုးတကျနမေယျဆိုရငျ
လာမယျ့( ၂၀၇၅ )ခုနှဈမှာ မိုးရခြေိနျ( ၅၈၈.၆၅)မီလီမီတာရှိတဲ့ မိုးကွီးမြိုးရှာသှနျးနိုငျပွီးဧရာမ ​ရကွေီးမှုတှနေဲ့ အတူပငျလယျရမေကျြနှာပွငျဟာ( ၄ )မီတာကနေ( ၇. ၈ )မီတာအထိ မွငျ့တကျလာနိုငျပွီးတော့ဒသေတှငျးက ရခြေိုမွဈတှဆေီကို
ပငျလယျဆားငံရမြေား ၀ငျရောကျကာသောကျသုံးရရှေားပါးမှု၊ငတျမှတျခေါငျးပါးမှုနဲ့ရောဂါဘယထူပွောမှုတှကွေောငျ့လူပေါငျး( ၆၈ )သနျး အထိဟာ နရေပျစှနျ့ခှာထှကျပွေးရမယျ့ အလားအလာ ရှိနပေါတယျ​။
ဒါကွောငျ့ ဘင်ျဂလီတှဟော ယခုကတညျးကနောငျတဈခြိနျမှာ ပြောကျကှယျတော့မယျဆိုတာကွိုသိတဲ့အတှကျ အိမျနီးခငျြး နိုငျငံတှကေိုအမြိုးမြိုး အဖုံဖုံ ခိုးဝငျလာကွာတာဟာအိမျရှငျနိုငျငံတှအေတှကျ အလှနျ​စှာမှစိုးရိမျစရာတှဖွေဈလာခဲ့ပါပွီ….
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ရခိုင်ပြည်ထဲသို့ ဘင်္ဂါလီများ ဘာ​ကြောင့်စိမ့်ဝင်နေကြပါသလဲ။
​ရင်သားတင်းမာမှုကို သက်သာစေနိုင်မယ့် လွယ်ကူထိရောက်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
မိန်းကလေးများဓမ္မတာမလာခင်အချိန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ကလေးငယ်နို့တိုက်ကျွေးချိန်နှင့် ဓမ္မတာဖြစ်ပြီးအချိန်များတွင် ရင်သားတင်းမာမှုကို ခံစားရသည်မှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ အချို့မိန်းကလေးများအတွက် ရင်သားတင်းမာမှုနှင့် နာကျင်မှုမှာ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးလျှင် အလိုအလျောက်ပျောက်ကင်းသွားတတ်သော်လည်း ထိုတင်းမာမှုကို ခံစားနေရစဉ်အတွင်း သက်သာမှုရှိစေရန်အတွက် အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို MyStyle Myanmar ကနေ တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
နှိပ်နယ်ပေးခြင်းသည် သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေတာကြောင့် နာကျင်မှုနှင့်တင်းမာမှုတို့ကို သက်သာပြေလျော့စေပါတယ်။
သံလွင်ဆီ သို့မဟုတ် အုန်းဆီကို ရင်သားအပေါ်လိမ်းကျံပေးပြီး အပေါ်ပိုင်းကနေစပြီး စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ညှင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်ကိုလည်း ပုံစံတူပြုလုပ်ပေးပါ။ သက်သာလာသည်အထိ တနေ့လျှင် ၂ ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်အထိ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
ရေခဲကပ်ပေးခြင်းက ရင်သားတင်းမာမှုအတွက်သာမက အခြားထိခိုက်ဒဏ်ရာများရဲ့ နာကျင်မှုကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ရေခဲတုံးများကို အ၀တ်တစ်ခုထဲတွင်ထည့်ချည်ပြီး ရင်သားအောက်၊ ဘယ်ဖက်၊ ညာဖက်တို့တွင် ရေခဲတုံးများအရည်ပျော်သွားသည်အထိ ထားရှိပေးပါ။ တနေ့လျှင်သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် – ရင်သားအပေါ်သို့တိုက်ရိုက်မလုပ်ပေးပါနှင့်။
အပူဓာတ်ပေးခြင်းက ရင်သားအတွင်းရှိ သွေးလည်ပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စေရန် ကူညီပေးနိုင်တာကြောင့် လက်ကိုင်ပုဝါတစ်ထည်ကို ရေနွေးနွေးထဲထည့်စိမ်ပြီး ရေညှစ်ထုတ်ပစ်ပါ။ စိုစွတ်ပြီးအနွေးဓာတ်ရှိနေသည့် တဘက်ကို နာကျင်သည့်နေရာတ၀ိုက်တွင် အ၀တ်ခြောက်သွားသည်အထိထားပေးပါ။ တစ်ခါလုပ်လျှင် သုံးကြိမ်မှလေးကြိမ်အထိ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
သက်သောင့်သက်သာမရှိသည့်၊ သေချာဆံ့ဝင်မှုမရှိသည့် အတွင်းခံများကို ၀တ်ဆင်ခြင်းကနေလည်း ရင်သားတင်းမာမှုနှင့် နာကျင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရမ်းတင်းကြပ်နေသည့် သို့မဟုတ် ကြိုးပါသည့်၊ ဟောင်းနွမ်းနေသည့် အတွင်းခံများကို မ၀တ်ဆင်ပါနှင့်။
အကြောများကို သက်သာရာရစေရုံသာမက သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းရှိ ကြက်ဆူဆီကို သံလွင်ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းဖြင့် ရောစပ်ကာ တင်းမာနေသောရင်သားများအပေါ် လိမ်းပေးပါ။ ပြီးလျှင် အနွေးဓာတ်ရှိသည့်အ၀တ်ကို ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်အထိ ထားပေးပြီးနောက် ကြက်သီးနွေးထရုံမျှရေဖြင့် ဆီများကိုဆေးကြောသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တနေ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်ခန့် ဗီတာမင်အီးအဆီကို အသုံးပြုပြီး ညှင်သာစွာနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ထို့အပြင် နေကြာစေ့၊ အယ်လ်မွန်၊ သံလွင်ဆီ၊ ဒေါက်ခွရွက်၊ ထောပတ်သီး၊ တရုတ်မုန်လာတို့ကဲ့သို့သော ဗီတာမင်အီးကြွယ်ဝသည့်အစားအစာများကို စားသုံးပေးပါ။
မိနျးကလေးမြားဓမ်မတာမလာခငျအခြိနျ၊ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ၊ ကလေးငယျနို့တိုကျကြှေးခြိနျနှငျ့ ဓမ်မတာဖွဈပွီးအခြိနျမြားတှငျ ရငျသားတငျးမာမှုကို ခံစားရသညျမှာ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျတဈခုပါ။ အခြို့မိနျးကလေးမြားအတှကျ ရငျသားတငျးမာမှုနှငျ့ နာကငျြမှုမှာ အခြိနျအတိုငျးအတာတဈခုပွီးလြှငျ အလိုအလြောကျပြောကျကငျးသှားတတျသျောလညျး ထိုတငျးမာမှုကို ခံစားနရေစဉျအတှငျး သကျသာမှုရှိစရေနျအတှကျ အလှယျတကူလုပျဆောငျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို MyStyle Myanmar ကနေ တငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
သံလှငျဆီ သို့မဟုတျ အုနျးဆီကို ရငျသားအပျေါလိမျးကြံပေးပွီး အပျေါပိုငျးကနစေပွီး စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဏ္ဍာနျအတိုငျး ညှငျသာစှာ နှိပျနယျပေးပါ။ အခွားတဈဖကျကိုလညျး ပုံစံတူပွုလုပျပေးပါ။ သကျသာလာသညျအထိ တနလြေှ့ငျ ၂ ကွိမျမှ သုံးကွိမျအထိ လုပျဆောငျပေးပါ။
ရခေဲတုံးမြားကို အ၀တျတဈခုထဲတှငျထညျ့ခညျြပွီး ရငျသားအောကျ၊ ဘယျဖကျ၊ ညာဖကျတို့တှငျ ရခေဲတုံးမြားအရညျပြျောသှားသညျအထိ ထားရှိပေးပါ။ တနလြေှ့ငျသုံးကွိမျပွုလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
အပူဓာတျပေးခွငျးက ရငျသားအတှငျးရှိ သှေးလညျပတျမှုကိုကောငျးမှနျစရေနျ ကူညီပေးနိုငျတာကွောငျ့ လကျကိုငျပုဝါတဈထညျကို ရနှေေးနှေးထဲထညျ့စိမျပွီး ရညှေဈထုတျပဈပါ။ စိုစှတျပွီးအနှေးဓာတျရှိနသေညျ့ တဘကျကို နာကငျြသညျ့နရောတ၀ိုကျတှငျ အ၀တျခွောကျသှားသညျအထိထားပေးပါ။ တဈခါလုပျလြှငျ သုံးကွိမျမှလေးကွိမျအထိ လုပျဆောငျပေးပါ။
သကျသောငျ့သကျသာမရှိသညျ့၊ သခြောဆံ့ဝငျမှုမရှိသညျ့ အတှငျးခံမြားကို ၀တျဆငျခွငျးကနလေညျး ရငျသားတငျးမာမှုနှငျ့ နာကငျြမှုကို ဖွဈပျေါလာစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရမျးတငျးကွပျနသေညျ့ သို့မဟုတျ ကွိုးပါသညျ့၊ ဟောငျးနှမျးနသေညျ့ အတှငျးခံမြားကို မ၀တျဆငျပါနှငျ့။
အကွောမြားကို သကျသာရာရစရေုံသာမက သှေးလညျပတျမှုကိုလညျး ပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။ လကျဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျးရှိ ကွကျဆူဆီကို သံလှငျဆီ လကျဖကျရညျဇှနျးနှဈဇှနျးဖွငျ့ ရောစပျကာ တငျးမာနသေောရငျသားမြားအပျေါ လိမျးပေးပါ။ ပွီးလြှငျ အနှေးဓာတျရှိသညျ့အ၀တျကို ၅ မိနဈမှ ၁၀ မိနဈခနျ့အထိ ထားပေးပွီးနောကျ ကွကျသီးနှေးထရုံမြှရဖွေငျ့ ဆီမြားကိုဆေးကွောသနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ။
တနလြေှ့ငျအကွိမျအနညျးငယျခနျ့ ဗီတာမငျအီးအဆီကို အသုံးပွုပွီး ညှငျသာစှာနှိပျနယျပေးပါ။ ထို့အပွငျ နကွောစေ့၊ အယျလျမှနျ၊ သံလှငျဆီ၊ ဒေါကျခှရှကျ၊ ထောပတျသီး၊ တရုတျမုနျလာတို့ကဲ့သို့သော ဗီတာမငျအီးကွှယျဝသညျ့အစားအစာမြားကို စားသုံးပေးပါ။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ရင်သားတင်းမာမှုကို သက်သာစေနိုင်မယ့် လွယ်ကူထိရောက်နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
​သင်သောက်လိုက်တဲ့ရေက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲဆိုဒါ
ရေသောက်ခြင်းက ကျောက်ကပ်၊ အသည်းနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးကိုဘဲ အဓိကအကျိုးရှိတယ်လို့ ထင်နေကြတာများပါတယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ သင်သောက်လိုက်တဲ့ရေနဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ကလည်း ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်တစ်နေ့ကို ရေ အနည်းဆုံး ၇ ခွက်၊ ၈ ခွက်လောက်သောက်သုံးသင့်တာပါ။ သင်ရေသောက်လိုက်ရင်
သင့်ဦးနှောက် အလုပ်လုပ်တာ ပိုမြန်လာ
ဦးနှောက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်ပြည့်ပြည့်၀၀ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာနိုးတာနဲ့ ရေသောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းအိပ်ယာနိုးချိန်မှာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေက ရေဓာတ်ကို လိုအပ်နေပါပြီ။ သင်က ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီကြား အိပ်ထားတာကြောင့် ရေဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။
အသက်ပြင်းပြင်းရှုလိုက်တိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရေဓာတ်တွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မနက်မိုးလင်းမှာ ရေတစ်ခွက် ၀၀သောက်ဖို့ လိုအပ်တာပါ။
ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်လာရင် ခေါင်းမူးလာတတ်ပါတယ်။ အာရုံစိုက်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ထက်ပိုဆိုးလာရင် ဦးနှောက် မှတ်ဥာဏ်တွေကိုပါ ထိခိုက်လာပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာ ရေ၁ ဗူးသို့မဟုတ် ရေ၁ ခွက်ဘေးနားမှာထားပြီးသောက်ပေးရင် အာရုံစိုက်မှုပိုကောင်းလာမှာပါ။ အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ်ကြားတစ်ခါ ရေသောက်ပေးပါ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်တွေကို မျှတအောင် လုပ်ဆောင်ပေး
ဒေါသထွက်၊ စိတ်ဆိုးနေရင် ရေသောက်လိုက်ရင် သက်သာသွားတာကို ခံစားမိကြမှာပါ။
ရေက ဦးနှောက်ထဲက အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီး အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေသောက်မှန်တဲ့သူက အသက်အရွယ်ကြောင့် သတိမေ့တတ်တာ၊ မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတာတွေကို လျော့ပါးနိုင်ပါတယ်။
သငျသောကျလိုကျတဲ့ရကေ ဦးနှောကျကို ဘယျလို သကျရောကျမှုတှရှေိသလဲ
ရသေောကျခွငျးက ကြောကျကပျ၊ အသညျးနဲ့ နှလုံးကနျြးမာရေးကိုဘဲ အဓိကအကြိုးရှိတယျလို့ ထငျနကွေတာမြားပါတယျ။
တကယျတမျးကတြော့ သငျသောကျလိုကျတဲ့ရနေဲ့ ဦးနှောကျနဲ့ကလညျး ဆကျစပျမှုရှိပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့တဈနကေို့ ရေ အနညျးဆုံး ၇ ခှကျ၊ ၈ ခှကျလောကျသောကျသုံးသငျ့တာပါ။ သငျရသေောကျလိုကျရငျ
သငျ့ဦးနှောကျ အလုပျလုပျတာ ပိုမွနျလာ
ဦးနှောကျ မှနျမှနျကနျကနျနဲ့ အလုပျလုပျဖို့အတှကျဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရဓောတျပွညျ့ပွညျ့၀၀ရှိနဖေို့လိုအပျပါတယျ။
မနကျမိုးလငျးအိပျယာနိုးတာနဲ့ ရသေောကျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မနကျမိုးလငျးအိပျယာနိုးခြိနျမှာ ဦးနှောကျဆဲလျတှကေ ရဓောတျကို လိုအပျနပေါပွီ။ သငျက ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီကွား အိပျထားတာကွောငျ့ ရဓောတျတှေ ဆုံးရှုံးနပေါတယျ။
အသကျပွငျးပွငျးရှုလိုကျတိုငျး ခန်ဓာကိုယျထဲက ရဓောတျတှဆေုံးရှုံးသှားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မနကျမိုးလငျးမှာ ရတေဈခှကျ ၀၀သောကျဖို့ လိုအပျတာပါ။
ရဓောတျခမျးခွောကျလာရငျ ခေါငျးမူးလာတတျပါတယျ။ အာရုံစိုကျလို့မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ထကျပိုဆိုးလာရငျ ဦးနှောကျ မှတျဉာဏျတှကေိုပါ ထိခိုကျလာပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ အလုပျလုပျနခြေိနျမှာ ရေ၁ ဗူးသို့မဟုတျ ရေ၁ ခှကျဘေးနားမှာထားပွီးသောကျပေးရငျ အာရုံစိုကျမှုပိုကောငျးလာမှာပါ။ အနညျးဆုံး ၄၅ မိနဈကွားတဈခါ ရသေောကျပေးပါ။
စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခံစားခကျြတှကေို မြှတအောငျ လုပျဆောငျပေး
ဒေါသထှကျ၊ စိတျဆိုးနရေငျ ရသေောကျလိုကျရငျ သကျသာသှားတာကို ခံစားမိကွမှာပါ။
ရကေ ဦးနှောကျထဲက အပူခြိနျကိုထိနျးညှိပေးပွီး အဆိပျအတောကျတှနေဲ့ ဆဲလျအသတှေကေို ဖယျရှားပေးပွီး စိတျကိုတညျငွိမျအောငျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
ရသေောကျမှနျတဲ့သူက အသကျအရှယျကွောငျ့ သတိမတေ့တျတာ၊ မှတျဉာဏျမကောငျးတာတှကေို လြော့ပါးနိုငျပါတယျ။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​သင်သောက်လိုက်တဲ့ရေက ဦးနှောက်ကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲဆိုဒါ
ဒီနေ့ခေတ် နေထိုင်စားသောက်ပုံစံက အသင့်စားအစားအစာတွေ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ သကြားများတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ကြတာများပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင် စိတ်ဖိစီးမှု၊ အရက်၊ ဆေးလိပ် သောက်သုံးမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှုနည်းတာတွေကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများစေပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းလာတာကြောင့် အဆုတ်၊ အသားအရေ၊ ကျောက်ကပ်၊ အသည်း နဲ့အူလမ်းကြောင်းတွေကလည်း ပိုပြီး အလုပ်လုပ်လာရပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်တွေ လျော့ကျလာမယ်၊ မူးဝေ အော့အန်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၊ ၀က်ခြံများလာတာနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများလာတာကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေများနေတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ရပ်ပါ။
ဒါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ထိထိရောက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ အသီးဖျော်ရည်အကြောင်းကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။
ရေ ဖန်ခွက် ၁ ခွက်
အစိမ်းရောင် ပန်းသီး ၄ လုံး
ဂျင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
သံပုရာသီးကို အခွံခွာလိုက်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကို သေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပြီး ဖျော်စက်ထဲထည့်ကာ မွှေပြီး သောက်နိုင်ပါပြီ။
ဒီနခေ့တျေ နထေိုငျစားသောကျပုံစံက အသငျ့စားအစားအစာတှေ၊ ပွုပွငျထားတဲ့ အစားအစာ၊ သကွားမြားတဲ့ အစားအစာတှကေို စားသောကျကွတာမြားပါတယျ။
အဲ့ဒီအပွငျ စိတျဖိစီးမှု၊ အရကျ၊ ဆေးလိပျ သောကျသုံးမှုနဲ့ ခန်ဓာကိုယျ လှုပျရှားမှုနညျးတာတှကေလညျး ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှမြေားစပေါတယျ။
သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ညဈညမျးလာတာကွောငျ့ အဆုတျ၊ အသားအရေ၊ ကြောကျကပျ၊ အသညျး နဲ့အူလမျးကွောငျးတှကေလညျး ပိုပွီး အလုပျလုပျလာရပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျတှေ လြော့ကလြာမယျ၊ မူးဝေ အော့အနျ၊ ပငျပနျးနှမျးနယျ၊ ၀ကျခွံမြားလာတာနဲ့ စိတျဖိစီးမှုမြားလာတာကလညျး ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ အဆိပျအတောကျတှမြေားနတေဲ့ လက်ခဏာ တဈရပျပါ။
ဒါကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျထဲက အဆိပျအတောကျတှကေို ထိထိရောကျဖယျရှားပေးနိုငျတဲ့ သဘာဝ အသီးဖြျောရညျအကွောငျးကို ဝေမြှခငျြပါတယျ။
အစိမျးရောငျ ပနျးသီး ၄ လုံး
ဂငျြး လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ ဇှနျး
သံပုရာသီးကို အခှံခှာလိုကျပါ။ ပါဝငျပစ်စညျးတှအေားလုံးကို သေးသေးလေးတှဖွေဈအောငျ လှီးပွီး ဖြျောစကျထဲထညျ့ကာ မှပွေီး သောကျနိုငျပါပွီ။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို အစိမ်းရောင်ပန်းသီးဖျော်ရည်နဲ့ ဖယ်ရှားလိုက်ရအောင်
​အစ်ကိုဝမ်းကွဲ၏ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် ၈ လအရွယ် ကလေးငယ် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရ
အစ်ကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူရဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက ရှစ်လအရွယ် ကလေးငယ်တဦးဟာ ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသခံနေရပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေတယ်လို့ တိုင်းမ်အော့ဖ်အိန္ဒိယ သတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အဲဒီကလေးငယ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေ ထိခိုက်သွားတဲ့အတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်နေတယ်လို့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
ကလေးငယ်ကို အချိန် ၃ နာရီကြာ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ ဒေလီမြို့ အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မရှင် အကြီးအကဲ ဆွာတီမာလီဝဲလ်က ပြောပါတယ်။
“ငယ်သံပါအောင် အော်ငိုနေတဲ့အသံကို အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်ထဲက ကြားရတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွင်းပိုင်းအင်္ဂါတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်ခံထားရတယ်ရှင့်။”
ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ နေအိမ်မှာ မိဘတွေမရှိတဲ့အချိန် ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ နေအိမ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ သွေးထွက်လွန်နေတဲ့ သမီးငယ်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး အဲဒီအမျိုးသားကိုတော့ ဖမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အသက်မပြည့်သေးသူ ကလေးသူငယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်မှုဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်း ချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးဦးရေ ၁၁၀၀၀ နီးပါး ရှိတယ်လို့ အမျိုးသားပြစ်မှုမှတ်တမ်းဆိုင်ရာဗျူရိုက ဆိုပါတယ်။
ဒါဟာ ဒေလီမြို့တော်မှာ နေ့စဉ် ကလေးသုံးဦးမှာ တဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံနေရတယ်ဆိုတာ ပြသနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မုဒိမ်းမြို့တော်လို့ သိကြတဲ့ နယူးဒေလီမြို့တော်ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ကျောင်းသူတဦးကို အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက် သတင်းစာခေါင်းစီးတွေမှာ နေရာယူခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတလွှား ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဈကိုဝမျးကှဲ၏ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံရသညျ့ ၈ လအရှယျ ကလေးငယျ အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရ
အဈကိုဝမျးကှဲဖွဈသူရဲ့ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံခဲ့ရတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံက ရှဈလအရှယျ ကလေးငယျတဦးဟာ ဆေးရုံတကျရောကျ ကုသခံနရေပွီး အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနမှော ရှိနတေယျလို့ တိုငျးမျအော့ဖျအိန်ဒိယ သတငျးတပုဒျမှာ ဖျောပွပါတယျ။
အဲဒီကလေးငယျကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ ဆေးရုံကို ပို့ဆောငျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှေ ထိခိုကျသှားတဲ့အတှကျ အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျရတဲ့ အနအေထား ဖွဈနတေယျလို့ ရဲတှကေ ပွောပါတယျ။
ကလေးငယျကို အခြိနျ ၃ နာရီကွာ ခှဲစိတျကုသမှုတှေ လုပျဆောငျပေးခဲ့ရတယျလို့ ဒလေီမွို့ အမြိုးသမီးရေးရာ ကျောမရှငျ အကွီးအကဲ ဆှာတီမာလီဝဲလျက ပွောပါတယျ။
“ငယျသံပါအောငျ အျောငိုနတေဲ့အသံကို အထူးကွပျမတျ ကုသဆောငျထဲက ကွားရတယျ။ သူ့ရဲ့ အတှငျးပိုငျးအင်ျဂါတှေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုကျခံထားရတယျရှငျ့။”
ဒီအဖွဈအပကျြဟာ နအေိမျမှာ မိဘတှမေရှိတဲ့အခြိနျ ဖွဈခဲ့တာဖွဈပွီး သူတို့ နအေိမျပွနျရောကျလာခြိနျမှာ သှေးထှကျလှနျနတေဲ့ သမီးငယျကို တှရှေိ့ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ပွဈမှုကြူးလှနျသူဟာ ကလေးငယျရဲ့ အဈကိုဝမျးကှဲတျောစပျသူ အသကျ ၂၇ နှဈအရှယျ အမြိုးသားဖွဈပွီး အဲဒီအမြိုးသားကိုတော့ ဖမျးဆီးထားနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကာ အသကျမပွညျ့သေးသူ ကလေးသူငယျ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ပွဈမှုဥပဒအေရ ထောငျဒဏျတသကျတကြှနျး ခမြှတျခံရနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ၂၀၁၅ ခုနှဈက လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အဓမ်မပွုကငျြ့ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးဦးရေ ၁၁၀၀၀ နီးပါး ရှိတယျလို့ အမြိုးသားပွဈမှုမှတျတမျးဆိုငျရာဗြူရိုက ဆိုပါတယျ။
ဒါဟာ ဒလေီမွို့တျောမှာ နစေ့ဉျ ကလေးသုံးဦးမှာ တဦး အဓမ်မပွုကငျြ့ခံနရေတယျဆိုတာ ပွသနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့ မုဒိမျးမွို့တျောလို့ သိကွတဲ့ နယူးဒလေီမွို့တျောဟာ ၂၀၁၂ ခုနှဈက ကြောငျးသူတဦးကို အုပျစုဖှဲ့ အဓမ်မပွုကငျြ့ခဲ့တဲ့အတှကျ သတငျးစာခေါငျးစီးတှမှော နရောယူခဲ့ပွီး ကမျဘာတလှား ဟိုးလေးတကြျော ဖွဈခဲ့ဖူးပါတယျ။
Author admin 1Posted on January 31, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​အစ်ကိုဝမ်းကွဲ၏ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် ၈ လအရွယ် ကလေးငယ် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရ
​️အောက်​တန်းအကျဆုံး​️ယောကျာ်း (၄) မျိုး
(၂)ကိုယ်​နဲ့ပြတ်​သွားတဲ့ မိန်းက​လေး မ​ကောင်း​ကြောင်းကို ​နောက်​ရည်းစားအား အတင်းချတတ်​​သော​ ​ယောက်ျား။
(၃)မိန်းမတစ်​​ယောက်​ဆီကချူ စားတတ်​​သော​ ​ယောကျာ်း။
(၄)ပြတ်​သွားပြီးမှ အရှုံးမရှိပါဘူးကွာလို့​ပြောတဲ့​ ​ယောကျာ်း။
🍀️အဲ့ (၄)မျိုးစလုံး ကိုယ့်​မှာမရှိဘူးဆိုရင်​​ သေချာတယ်​
သင်​ဟာ မိ​ကောင်းဖခင်​မျိုးရိုးက​ ပေါက်​ဖွားလာတဲ့
️အောကျ​တနျးအကဆြုံး​️ယောကျြား (၄) မြိုး
(၂)ကိုယျ​နဲ့ပွတျ​သှားတဲ့ မိနျးက​လေး မ​ကောငျး​ကွောငျးကို ​နောကျ​ရညျးစားအား အတငျးခတြတျ​​သော​ ​ယောကျြား။
(၃)မိနျးမတဈ​​ယောကျ​ဆီကခြူ စားတတျ​​သော​ ​ယောကျြား။
(၄)ပွတျ​သှားပွီးမှ အရှုံးမရှိပါဘူးကှာလို့​ပွောတဲ့​ ​ယောကျြား။
🍀️အဲ့ (၄)မြိုးစလုံး ကိုယျ့​မှာမရှိဘူးဆိုရငျ​​ သခြောတယျ​
သငျ​ဟာ မိ​ကောငျးဖခငျ​မြိုးရိုးက​ ပေါကျ​ဖှားလာတဲ့
Author admin 1Posted on January 30, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​️အောက်​တန်းအကျဆုံး​️ယောကျာ်း (၄) မျိုး
*တီဘီရောဂါသည် အဓိကအားဖြင့် အဆုတ်ကို ထိခိုက် ပျက်စီးစေသော ရောဂါဖြစ် ပါသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းတို့ကို ထိရောက်စွာ ပြုလုပ်ပါက သက်သာ
ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော်လည်း စနစ်တကျ ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ် ကုသမှု မပြုလုပ်ပါက ပြင်းထန်ပြီး ကြောက်စရာကောင်းသော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ တီဘီလူနာ
ချောင်းဆိုးစဉ် သို့မဟုတ် နှာချေစဉ်တွင် လွင့်စင်ထွက်လာသော အလွန်သေးငယ်သည့် ချွဲ၊ သလိပ်၊ တံတွေးစက်များ(droplets) မှ တဆင့် လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ရောဂါကူးစက် ပျံ့နှံ့ပါသည်။
*ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများ၌ တီဘီရောဂါ အဖြစ်နည်းသွားရာမှ ၁၉၈၅ နောက်ပိုင်း၊ HIV ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ဆက်စပ်ကာ ပြန်လည်ခေါင်းထောင်လာပါသည်။ HIV ကူးစက်ခံရသူ သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ရောဂါ ခုခံနိုင်စွမ်း (ကိုယ်ခံအား) ကျဆင်းသွားသည့်အတွက် TB ရောဂါအပါအ၀င် အခြား ရောဂါများကို မကာကွယ်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် HIV ကူးစက်မှုနှင့်အတူ တီဘီရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ပြန်လည် များပြားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*တီဘီရောဂါပိုးသည် အမျိုးအစားပေါင်း များစွာရှိပြီး တီဘီရောဂါကုသဆေး အများစု ကို ဆေးယဉ် လျက်ရှိပါသည်။ တီဘီရောဂါ လက္ခဏာပြနေသော လူနာသည် ရောဂါကို ကုသရန်နှင့် ဆေးယဉ်ပါးမှု မဖြစ်စေရန်အတွက် ဆေးအမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကို တွဲဖက် သောက်သုံးရပါသည်။
*တီဘီရောဂါပိုး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှင် ဝင်ရောက်ချင်း ရောဂါ
လက္ခဏာ ပြလေ့ရှိသကဲ့သို့ ရောဂါ လက္ခဏာ ချက်ချင်းမပြဘဲ အချိန်အတန် ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာ ပြခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များသည် တီဘီလူနာကို ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးသော တီဘီလူနာ(Latent TB) နှင့် ရောဂါ လက္ခဏာပြသော တီဘီလူနာ (Active TB) ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲခြားထားပါသည်။ ရောဂါ လက္ခဏာ မပြသေးသော တီဘီလူနာတွင် လူနာသည် တီဘီပိုး ကူးစက်ခံထားရပါသည်။ သို့သော် ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးဘဲ ငြိမ်နေပါသည်။
*ဤအခြေအနေတွင် အခြားသူတစ်ဦးထံသို့ ရောဂါ မကူးစက်နိုင်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းရှိ တီဘီပိုးသည် အချိန်မရွေး ထကြွကာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြနိုင်သည့်
အတွက် စောလျင်စွာ ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည်
ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးသော တီဘီရောဂါရှိသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်းထား ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြသော တီဘီရောဂါရှင်သည် ဝေဒနာကို ခံစားရပြီး အခြား သူများသို့ ကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။ တီဘီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ ပြနိုင်သကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမှလည်း ရောဂါလက္ခဏာ ပြခြင်းမျိုး ရှိနိုင်ပါသည်။
(၂) ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန် မကြိုးစားဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားခြင်း
(၅) ညဘက် ချွေးထွက်ခြင်း
(၁) နှစ်ပတ်ထက် ကျော်ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း
(၂) ချောင်းဆိုးလျှင် သလိပ်နှင့် သွေးစသွေးနများ ပါခြင်း
(၃) ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ပြင်းပြင်းရှူ လျှင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးလျှင် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း စသည်တို့ကို ခံစားရပါသည်။
*တီဘီရောဂါပိုးသည် ကျောက်ကပ်၊ ကျောရိုးနှင့် ဦးနှောက် အပါအဝင်
ခန္ဓာကိုယ်၏ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ တီဘီပိုး တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းပေါ် မူတည်ကာ ရောဂါလက္ခဏာ ကို ကွဲပြားစွာ ခံစားရပါသည်။ ဥပမာ- TB Spine ဟုခေါ် သည့် ကျောရိုးတီဘီ ဖြစ်လျှင် ခါးနာတတ်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်တွင် တီဘီဖြစ်လျှင် ဆီးတွင် သွေးပါနိုင်ပါသည်။
*ထို့ကြောင့် ဖျားခြင်း၊ အကြောင်း မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်း သွားခြင်း၊ ညဘက်တွင် ချွေးထွက်ခြင်းနှင့် နှစ်ပတ်ထက်ကျော်လွန်ကာ ရက်ရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း တို့ကို ကြုံတွေ့ရပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသရပါမည်။ အထက်ပါ လက္ခဏာများ သည် အများအားဖြင့် တီဘီရောဂါ၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်ပါသည်။ တီဘီရောဂါ ဟုတ်မဟုတ်ကိုသေချာစေရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ လိုအပ်သော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ ဆုံးဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
“ #တီဘီရောဂါဖြစ်စေသောအကြောင်းများ ”
*တီဘီရောဂါပိုးသည် ဘက်တီးရီးယားပိုး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အလွန်သေးငယ်သော အရည်စက်များ (ချွဲ၊ သလိပ်၊ တံတွေး၊ နှပ်စသည်)မှ တဆင့် တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သောကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာပြသော တီဘီလူနာ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ နှာချေခြင်း၊ တံတွေးထွေးခြင်း၊ ရယ်မောခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း တို့ ပြုလုပ်နေစဉ်တွင် အခြားသူများ သို့ ကူးစက်လေ့ရှိပါသည်။ တီဘီရောဂါသည် ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါဟု ဆိုသော်လည်း ခရီးသွားဟန်လွှဲဖြင့် အလွယ်တကူ ကူးစက်လေ့မရှိပါ။
*တီဘီရောဂါ ဝေဒနာရှင်နှင့် အတူတကွ တပူးတွဲတွဲ နေထိုင်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း တို့ဖြင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာ ပြသော တီဘီလူနာ အများစုသည် မှန်ကန်သော ဆေးဝါးများကို တိတိကျကျ လိုက်နာသောက်သုံးပါက ဆေးသောက် ပြီး နှစ်ပတ်ကြာလျှင် အခြားသူများသို့ မကူးစက်နိုင်တော့ပါ။ တီဘီရောဂါသည် သေဆုံးမှု ရာခိုင်နှုန်းမြင့်သော ရောဂါများအနက် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်နေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသော်လည်း ဆေးယဉ်ခြင်း(ဆေးမတိုးခြင်း) ကအဓိက အကြောင်းအချက် ဖြစ်ပါသည်။
*လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ခန့်အချိန် ပထမဆုံး တီဘီဆေးဝါးများ အသုံးပြုစဉ် ကတည်းက တီဘီရောဂါပိုး အချို့သည် ဆေးဒဏ်ကို ခံနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ပဋိဇီဝဆေး တစ်မျိုးသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ တီဘီရောဂါပိုး အားလုံးကို မသတ်နိုင်သော အခါ ဆေးယဉ်နေသော တီဘီပိုးများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။
*၄င်းဆေးယဉ်နေသော တီဘီပိုးသည် ကြုံ တွေ့ဖူးသော ပဋိဇီဝဆေး အမျိုးအစားကို သာမက အခြားသော ပဋိဇီဝဆေးများကိုပါ ယဉ်ပါးခြင်းမျိုး ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါသည်။
*လူတိုင်းသည် တီဘီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အောက်ပါ
အချက်များကြောင့် ကူးစက်ခံရခြေ ပိုမို မြင့်မားလာနိုင်ပါသည်။
HIV/AIDS ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား လျော့နည်းသွားသည့် အတွက် တီဘီရောဂါ ဖြစ်စေရန် အခွင့်အရေး တိုးလာပါသည်။ သွေးချိုဆီးချိုရောဂါ၊
ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အချို့သော ကင်ဆာ ရောဂါများ၊ ကင်ဆာ ဆေးသွင်း
ကုသခြင်း၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း၊ အသက်ငယ်လွန်းခြင်း၊ အသက်ကြီးလွန်းခြင်းတို့ကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား အားပျော့သွားသည့်အချိန်တွင် တီဘီရောဂါ ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေးများပါသည်။
ငွေကြေး ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဝေးလံခေါင်သီသော နေရာဒေသများတွင်
နေထိုင်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန် ခက်ခဲသော သူများသည် တီဘီရောဂါ ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေး များပါသည်။
အရက်ကို အဆက်မပြတ် သောက်သုံးသောသူသည် ကိုယ်ခံအားပျော့သွားပြီး တီဘီရောဂါကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေး ပိုလာပါသည်။ ဆေးလိပ် သောက်သောသူသည် တီဘီရောဂါ ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေး အလွန်များပါသည်။
ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများသည် တီဘီရောဂါရှင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရသည့် အတွက် ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးများပါသည်။ နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ခြင်း၊ မကြာခဏ လက်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် ကူးစက်ခံရမည့် ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
ထောင်တွင်းအကျဉ်းသားများ၊ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းများ စသည့် လူစုလူဝေးဖြင့် စုပေါင်းနေထိုင်ရသည့် နေရာများတွင် တီဘီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရရန် အခွင့်အရေး များပါသည်။
“ #တီဘီရောဂါနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ”
*ကုသမှု မခံယူပါက တီဘီရောဂါသည် သေစေနိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါလက္ခဏာ ပြနေသော တီဘီလူနာသည် ကုသမှု မခံယူပါက အဆုတ်ကို
ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် တီဘီပိုးများသည် သွေးမှတစ်ဆင့် အခြားသော ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသွားပါသည်။ တီဘီပိုးသည် အရိုးသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသောအခါ ကျောရိုးအတွင်း နာကျင်ခြင်း၊ ကျောရိုးဆစ်များ ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ခံစားရပါသည်။ အချို့သောသူများတွင် နံရိုးများ၌ တီဘီပိုး ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။
*တီဘီပိုးသည် ဦးနှောက်သို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိသောအခါ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း
ကိုခံစားရပါသည်။ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ပြီး အရည်များဖြင့် စုဖောင်းလာသောအခါ အသက် သေဆုံးစေနိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာမှ
နေ့စဉ် ထွက်ရှိလာသော အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ထုတ် သန့်စင်ပေးရပါသည်။
*ကျောက်ကပ်နှင့် အသည်းသို့ တီဘီပိုး ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိပြီး ပျက်စီးစေသောအခါ
ခန္ဓာကိုယ်မှ နေ့စဉ်ထွက်ရှိသော အဆိပ်အတောက်များသည် ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း၌
စုပုံကာ ရောဂါမျိုးစုံကို ခံစားရစေပါသည်။ တီဘီရောဂါပိုးသည် နှလုံးကို ဝန်းရံထားသည့် တစ်ရှူးများထံသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ နှလုံး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တစ်ရှူးများသည် တီဘီရောဂါပိုးကြောင့် ရောင်ရမ်းလာသည့်အခါ နှလုံး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရည်ဓာတ်များ စုပုံလာပါသည်။
*၄င်းစုပုံလာသော အရည်ဓာတ်များသည် နှလုံးအား မညှစ်နိုင်အောင် ဖိထားသကဲ့ သို့ ဖြစ်နေသည့်အတွက် အချိန်ကြာလာသောအခါ နှလုံးရပ်ပြီး သေဆုံးနိုင်ပါသည်။
“ #စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ ”
*တီဘီရောဂါရှိကြောင်း သေချာစေရန် အတွက် စမ်းသပ် စစ်ဆေးရာတွင်
အောက်ပါ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်ပါသည်။
*ဘက်တီရီးယားပိုး အုပ်စုဝင်ဖြစ်သော တီဘီရောဂါပိုးကို ကုသရာတွင် အခြားသော ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို ကုသခြင်းထက် အချိန်ပိုကြာပါသည်။သောက်ဆေးဖြင့် ကုသရ ပါသည်။ ပဋိဇီဝ သောက်ဆေးများကို အနည်းဆုံး ၆ လမှ ၉ လ အထိ သောက်ရ လေ့ရှိပါ သည်။
*တီဘီ ရောဂါရှင်၏ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ၊ မတိုးတော့သော
ဆေးဝါးများ၊ တီဘီရောဂါ အမျိုးအစားနှင့် တီဘီ ရောဂါ ဖြစ်သည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တို့အပေါ် မူတည်ကာ သောက်ရမည့် ဆေးပမာဏ၊ သောက်ရမည့် ကာလ အပိုင်းအခြားတို့ ကွဲပြားခြားနားသွားပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာ မပြသေးသော တီဘီလူနာများသည် တီဘီဆေး အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းကို သောက်သုံးရုံဖြင့် လုံလောက်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာပြသည့် တီဘီလူနာများတွင်မူ တစ်ခါ သောက်လျှင် တီဘီဆေး တစ်မျိုးထက်ပိုကာ သောက်ရလေ့ရှိပြီး ဆေးယဉ် တီဘီ လူနာများတွင်မူ အမျိုးအစား ပိုမိုသောက်ရလေ့ ရှိပါသည်။ အသုံး အများဆုံးသော တီဘီဆေးများမှာ-
*တီဘီဆေးများတွင် အခြားသော ဆေးများ နည်းတူ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိပါသည် ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကို မပြတတ်သော်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံစား ရပြီ ဆိုပါက ပြင်းထန်နိုင်ပါသည်။ တီဘီဆေး သောက်သုံးနေစဉ်အတွင်း-
(၅) အကြောင်းအရင်း မသိဘဲ သုံးရက်ထက် ပိုဖျားခြင်း စသည်တို့ကို ခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ဆုံး တွေ့ဆုံသင့်ပါသည်။
*တီဘီဆေး သောက်သုံးပြီး ရက် သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကျော် ကြာလာသောအခါ သူတစ်ပါးသို့ တီဘီရောဂါ မကူးစက်နိုင်တော့ပါ။ ထို့ပြင် ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာသွားပြီး နေရထိုင်ရသည်မှာ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်လာပါသည်။ ဤအချိန်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တီဘီလူနာ သည် နေထိုင်ကောင်းလာပြီး တီဘီဆေးကို ဆက်မသောက်လိုတော့သည့် စိတ်ဆန္ဒ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
*တီဘီဆေးအမျိုးအစား အားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလ ပြည့်မီအောင် တိတိကျကျ သောက်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ တီဘီဆေး သောက်ခြင်းကို ရပ်ချိန် မတိုင်မီ ရပ်ခြင်းနှင့် တီဘီဆေးကို အချိန်မှန်မှန် မသောက်မိခြင်းများကြောင့် တီဘီပိုးကို ဆေးယဉ်တီဘီပိုးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိစေပါသည်။ ဆေးယဉ်တီဘီ
ဖြစ်ပြီဆိုပါက ဆေးမတိုးတော့ဘဲ ပိုမိုအန္တရာယ်ရှိပြီး ပိုမိုကုသရ ခက်ခဲသော တီဘီပိုးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
*တီဘီဆေးသောက်ဖို့ မမေ့စေရန် အတွက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ လူနာကို နေ့စဉ် တိုက်ရိုက်တွေ့ထိဆေးတိုက်သော စနစ် (DOTS) ကို ကျင့်သုံးရလေ့ ရှိပါသည်။
“ #တီဘီရောဂါအားကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း ”
*တီဘီရောဂါ လက္ခဏာ မပြသေးသော်လည်း စမ်းသပ် စစ်ဆေးချက်များ အရ တီဘီပိုး ကူးစက်ခံရသည်ဟု တွေ့ရှိရပါက ရောဂါလက္ခဏာ ပြသည့် အဆင့်သို့ မရောက်စေအောင် ဆေးဝါးများ ကြိုတင် သောက်သုံးထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ရောဂါ လက္ခဏာ ပြမှ အခြားသူများသို့ ရောဂါ ကူးစက်နိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ရောဂါ လက္ခဏာ မပြအောင် ဆေးဝါးများ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် တီဘီလူနာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူများကို တီဘီရောဂါ မကူးစက်အောင် ကာကွယ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
*အကယ်၍ တီဘီရောဂါ လက္ခဏာပြသော တီဘီလူနာ ဖြစ်ပါက အခြားသူများသို့ မကူးစက် နိုင်သည် အထိ ဆေးဝါးများ သောက်သုံးနေစဉ် အတွင်း အောက်ပါ အချက်များကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တီဘီလူနာ ပတ်ဝန်းကျင်မှ သူများကို ကူးစက်မှု လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) အိမ်မှာ နေပါ။
လူထူ ထပ်သည့် နေရာများ ဖြစ်သော အလုပ်၊ ကျောင်း စသည်တို့ကို မသွားဘဲ တစ်သီးတစ်သန့် နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အခြားသူကို ကူးစက်မှု လျှော့ချနိုင်ပါသည်။
(၂) လေဝင် လေထွက် ကောင်းပါစေ။
အလုံပိတ် အခန်းအတွင်း နေထိုင်ခြင်းဖြင့် အခန်းထဲတွင် တီဘီရောဂါပိုးများ ပိုမို သိပ်သည်းစွာ ပျံ့နှံ့နေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခန်းအား လေဝင်လေထွက်
ကောင်းအောင် တံခါးချပ်များ ဖွင့်ဟ ထားသင့်ပါသည်။ တံခါးဖွင့်ပြီး ပန်ကာ ဖွင့်ထားပါက ပိုမို ထိရောက်မှု ရှိပါသည်။
တီဘီလူနာ ရယ်မောသောအခါ၊ နှာချေသောအခါ၊ ချောင်းဆိုးသောအခါ တစ်ရှူးသို့မဟုတ် လက်ကိုင်ပဝါ ဖြင့် ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်ထားရပါမည်။ ထို့နောက် လုံအောင်ပိတ်ကာ စွန့်ပစ်ရပါမည်။
ခွဲစိတ်ခန်းများတွင် အသုံးပြုသည့် နှာခေါင်းစည်းကဲ့သို့ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ကို လုံအောင် ကာကွယ်နိုင်သည့် နှာခေါင်းစည်းများ စည်းထားသင့်ပါသည်။ တစ်ခါ သုံး နှာခေါင်းစည်းများကို ဈေးပေါပေါဖြင့် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါသည်။
*အထက်ပါ အချက်များကို ဆောင်ရွက်ရမည့် အပြင် တီဘီလူနာသည် ဆေးကို သတ်မှတ်ရက် ရောက်သည်အထိ အပြည့် သောက်ရပါမည်။ ဆေးကို လိပ်ပတ် လည်အောင် သောက်ခြင်းသည် တီဘီလူနာ နှင့်တကွ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ
လူများ အားလုံးကို ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေပါသည်။ ကလေးသူငယ်များတွင်
ပြင်းထန်သော တီဘီရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရန် အတွက် တီဘီရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်ပါသည်။
*သတိပြုရန်မှာ BCG ကာကွယ်ဆေးသည် ကလေးသူငယ် များတွင်သာ အာနိသင် ထိရောက်မှု ရှိပြီး လူကြီးများတွင် အာနိသင် အပြည့်အဝ မရရှိသောကြောင့် လူကြီးများတွင် ကာကွယ်ဆေး အနေနှင့် အသုံးမပြုသင့်ပါ။
*ပိုမိုအစွမ်းထက်သော တီဘီရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများ ရရှိရန်အတွက်
သိပံ္ပပညာရှင်များက သုတေသန ပြုလုပ်လျှက် ရှိပါသည်။ ပရိသတ်များ
ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသော တီဘီရောဂါအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
*တီဘီရောဂါသညျ အဓိကအားဖွငျ့ အဆုတျကို ထိခိုကျ ပကျြစီးစသေော ရောဂါဖွဈ ပါသညျ။ ကွိုတငျကာကှယျခွငျး၊ ကုသခွငျးတို့ကို ထိရောကျစှာ ပွုလုပျပါက သကျသာ
ပြောကျကငျးစနေိုငျသျောလညျး စနဈတကြ ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျ ကုသမှု မပွုလုပျပါက ပွငျးထနျပွီး ကွောကျစရာကောငျးသော ရောဂါဖွဈပါသညျ။ တီဘီလူနာ
ခြောငျးဆိုးစဉျ သို့မဟုတျ နှာခစြေဉျတှငျ လှငျ့စငျထှကျလာသော အလှနျသေးငယျသညျ့ ခြှဲ၊ သလိပျ၊ တံတှေးစကျမြား(droplets) မှ တဆငျ့ လူတဈဦးမှ တဈဦးသို့ ရောဂါကူးစကျ ပြံ့နှံ့ပါသညျ။
*ဖှံ့ဖွိုးပွီး နိုငျငံမြား၌ တီဘီရောဂါ အဖွဈနညျးသှားရာမှ ၁၉၈၅ နောကျပိုငျး၊ HIV ဖွဈပှားမှုနှငျ့ ဆကျစပျကာ ပွနျလညျခေါငျးထောငျလာပါသညျ။ HIV ကူးစကျခံရသူ သညျ ခန်ဓာကိုယျ၏ ရောဂါ ခုခံနိုငျစှမျး (ကိုယျခံအား) ကဆြငျးသှားသညျ့အတှကျ TB ရောဂါအပါအ၀ငျ အခွား ရောဂါမြားကို မကာကှယျနိုငျတော့ပါ။ ထို့ကွောငျ့ HIV ကူးစကျမှုနှငျ့အတူ တီဘီရောဂါ ဖွဈပှားမှုနှုနျး ပွနျလညျ မြားပွားလာခွငျး ဖွဈပါသညျ။
*တီဘီရောဂါပိုးသညျ အမြိုးအစားပေါငျး မြားစှာရှိပွီး တီဘီရောဂါကုသဆေး အမြားစု ကို ဆေးယဉျ လကျြရှိပါသညျ။ တီဘီရောဂါ လက်ခဏာပွနသေော လူနာသညျ ရောဂါကို ကုသရနျနှငျ့ ဆေးယဉျပါးမှု မဖွဈစရေနျအတှကျ ဆေးအမြိုးအစား အမြိုးမြိုးကို တှဲဖကျ သောကျသုံးရပါသညျ။
*တီဘီရောဂါပိုး ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျလြှငျ ဝငျရောကျခငျြး ရောဂါ
လက်ခဏာ ပွလရှေိ့သကဲ့သို့ ရောဂါ လက်ခဏာ ခကျြခငျြးမပွဘဲ အခြိနျအတနျ ကွာမှ ရောဂါလက်ခဏာ ပွခွငျးမြိုးလညျး ရှိပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဆရာဝနျမြားသညျ တီဘီလူနာကို ရောဂါလက်ခဏာ မပွသေးသော တီဘီလူနာ(Latent TB) နှငျ့ ရောဂါ လက်ခဏာပွသော တီဘီလူနာ (Active TB) ဟူ၍ နှဈမြိုး ခှဲခွားထားပါသညျ။ ရောဂါ လက်ခဏာ မပွသေးသော တီဘီလူနာတှငျ လူနာသညျ တီဘီပိုး ကူးစကျခံထားရပါသညျ။ သို့သျော ရောဂါလက်ခဏာ မပွသေးဘဲ ငွိမျနပေါသညျ။
*ဤအခွအေနတှေငျ အခွားသူတဈဦးထံသို့ ရောဂါ မကူးစကျနိုငျပါ။ ခန်ဓာကိုယျ အတှငျးရှိ တီဘီပိုးသညျ အခြိနျမရှေး ထကွှကာ ရောဂါလက်ခဏာ ပွနိုငျသညျ့
အတှကျ စောလငျြစှာ ကုသရနျ လိုအပျပါသညျ။ ကမ်ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံးပုံတဈပုံသညျ
ရောဂါလက်ခဏာ မပွသေးသော တီဘီရောဂါရှိသညျဟု ကြှမျးကငျြသူမြားက ခနျ့မှနျးထား ပါသညျ။ ရောဂါလက်ခဏာပွသော တီဘီရောဂါရှငျသညျ ဝဒေနာကို ခံစားရပွီး အခွား သူမြားသို့ ကူးစကျစနေိုငျပါသညျ။ တီဘီရောဂါပိုး ကူးစကျခံရပွီး ရကျသတ်တပတျ အနညျးငယျ အတှငျး ရောဂါလက်ခဏာ ပွနိုငျသကဲ့သို့ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာမှလညျး ရောဂါလက်ခဏာ ပွခွငျးမြိုး ရှိနိုငျပါသညျ။
(၂) ကိုယျအလေးခြိနျ လြှော့ခရြနျ မကွိုးစားဘဲ ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားခွငျး
(၅) ညဘကျ ခြှေးထှကျခွငျး
တီဘီရောဂါပိုးသညျ အမြားအားဖွငျ့ အဆုတျကို ပကျြစီးစပေါသညျ။
(၁) နှဈပတျထကျ ကြျောပွီး ခြောငျးဆိုးခွငျး
(၂) ခြောငျးဆိုးလြှငျ သလိပျနှငျ့ သှေးစသှေးနမြား ပါခွငျး
(၃) ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး သို့မဟုတျ အသကျပွငျးပွငျးရှူ လြှငျ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး သို့မဟုတျ ခြောငျးဆိုးလြှငျ ရငျဘတျအောငျ့ခွငျး စသညျတို့ကို ခံစားရပါသညျ။
*တီဘီရောဂါပိုးသညျ ကြောကျကပျ၊ ကြောရိုးနှငျ့ ဦးနှောကျ အပါအဝငျ
ခန်ဓာကိုယျ၏ အခွားသော အစိတျအပိုငျးမြားကိုလညျး ပကျြစီးစနေိုငျပါသညျ။ တီဘီပိုး တိုကျခိုကျခံရသညျ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးပျေါ မူတညျကာ ရောဂါလက်ခဏာ ကို ကှဲပွားစှာ ခံစားရပါသညျ။ ဥပမာ- TB Spine ဟုချေါ သညျ့ ကြောရိုးတီဘီ ဖွဈလြှငျ ခါးနာတတျပါသညျ။ ကြောကျကပျတှငျ တီဘီဖွဈလြှငျ ဆီးတှငျ သှေးပါနိုငျပါသညျ။
*ထို့ကွောငျ့ ဖြားခွငျး၊ အကွောငျး မယျမယျရရ မရှိဘဲ ကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျး သှားခွငျး၊ ညဘကျတှငျ ခြှေးထှကျခွငျးနှငျ့ နှဈပတျထကျကြျောလှနျကာ ရကျရှညျခြောငျးဆိုးခွငျး တို့ကို ကွုံတှရေ့ပါက ဆရာဝနျနှငျ့ ပွသရပါမညျ။ အထကျပါ လက်ခဏာမြား သညျ အမြားအားဖွငျ့ တီဘီရောဂါ၏ လက်ခဏာမြား ဖွဈပါသညျ။ တီဘီရောဂါ ဟုတျမဟုတျကိုသခြောစရေနျအတှကျ ဆရာဝနျမှ လိုအပျသော စမျးသပျစဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျကာ ဆုံးဖွတျပေးမညျ ဖွဈပါသညျ။
“ #တီဘီရောဂါဖွဈစသေောအကွောငျးမြား ”
*တီဘီရောဂါပိုးသညျ ဘကျတီးရီးယားပိုး အမြိုးအစားဖွဈပါသညျ။ အလှနျသေးငယျသော အရညျစကျမြား (ခြှဲ၊ သလိပျ၊ တံတှေး၊ နှပျစသညျ)မှ တဆငျ့ တဈဦးမှ တဈဦးသို့ ကူးစကျပြံ့နှံ့သောကွောငျ့ ရောဂါ လက်ခဏာပွသော တီဘီလူနာ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ စကားပွောခွငျး၊ နှာခခြွေငျး၊ တံတှေးထှေးခွငျး၊ ရယျမောခွငျး၊ သီခငျြးဆိုခွငျး တို့ ပွုလုပျနစေဉျတှငျ အခွားသူမြား သို့ ကူးစကျလရှေိ့ပါသညျ။ တီဘီရောဂါသညျ ကူးစကျနိုငျသော ရောဂါဟု ဆိုသျောလညျး ခရီးသှားဟနျလှဲဖွငျ့ အလှယျတကူ ကူးစကျလမေ့ရှိပါ။
*တီဘီရောဂါ ဝဒေနာရှငျနှငျ့ အတူတကှ တပူးတှဲတှဲ နထေိုငျခွငျး၊ အလုပျလုပျခွငျး တို့ဖွငျ့ ကူးစကျခံရနိုငျပါသညျ။ ရောဂါလက်ခဏာ ပွသော တီဘီလူနာ အမြားစုသညျ မှနျကနျသော ဆေးဝါးမြားကို တိတိကကြ လိုကျနာသောကျသုံးပါက ဆေးသောကျ ပွီး နှဈပတျကွာလြှငျ အခွားသူမြားသို့ မကူးစကျနိုငျတော့ပါ။ တီဘီရောဂါသညျ သဆေုံးမှု ရာခိုငျနှုနျးမွငျ့သော ရောဂါမြားအနကျ တဈခု အပါအဝငျ ဖွဈနပေါသညျ။ ထိုသို့ဖွဈရခွငျးမှာ အကွောငျးရငျးမြားစှာ ရှိသျောလညျး ဆေးယဉျခွငျး(ဆေးမတိုးခွငျး) ကအဓိက အကွောငျးအခကျြ ဖွဈပါသညျ။
*လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၆၀ ခနျ့အခြိနျ ပထမဆုံး တီဘီဆေးဝါးမြား အသုံးပွုစဉျ ကတညျးက တီဘီရောဂါပိုး အခြို့သညျ ဆေးဒဏျကို ခံနိုငျစှမျး ရှိခဲ့ပါသညျ။ ပဋိဇီဝဆေး တဈမြိုးသညျ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးရှိ တီဘီရောဂါပိုး အားလုံးကို မသတျနိုငျသော အခါ ဆေးယဉျနသေော တီဘီပိုးမြား ပျေါပေါကျလာသညျ။
*၄ငျးဆေးယဉျနသေော တီဘီပိုးသညျ ကွုံ တှဖေူ့းသော ပဋိဇီဝဆေး အမြိုးအစားကို သာမက အခွားသော ပဋိဇီဝဆေးမြားကိုပါ ယဉျပါးခွငျးမြိုး ကွုံတှရေ့လရှေိ့ပါသညျ။
*လူတိုငျးသညျ တီဘီရောဂါပိုး ကူးစကျခံရနိုငျပါသညျ။ သို့သျော အောကျပါ
အခကျြမြားကွောငျ့ ကူးစကျခံရခွေ ပိုမို မွငျ့မားလာနိုငျပါသညျ။
HIV/AIDS ရောဂါကွောငျ့ ကိုယျခံစှမျးအား လြော့နညျးသှားသညျ့ အတှကျ တီဘီရောဂါ ဖွဈစရေနျ အခှငျ့အရေး တိုးလာပါသညျ။ သှေးခြိုဆီးခြိုရောဂါ၊
ကြောကျကပျရောဂါ၊ အခြို့သော ကငျဆာ ရောဂါမြား၊ ကငျဆာ ဆေးသှငျး
ကုသခွငျး၊ ကိုယျအင်ျဂါအစားထိုး ခှဲစိတျကုသမှု ခံယူခွငျး၊ အာဟာရခြို့တဲ့ခွငျး၊ အသကျငယျလှနျးခွငျး၊ အသကျကွီးလှနျးခွငျးတို့ကွောငျ့ ကိုယျခံစှမျးအား အားပြော့သှားသညျ့အခြိနျတှငျ တီဘီရောဂါ ကူးစကျခံရရနျ အခှငျ့အရေးမြားပါသညျ။
ငှကွေေး ခြို့တဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈစေ၊ ဝေးလံခေါငျသီသော နရောဒသေမြားတှငျ
နထေိုငျရခွငျးကွောငျ့ ဖွဈစေ ကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျမှု ရရှိရနျ ခကျခဲသော သူမြားသညျ တီဘီရောဂါ ကူးစကျခံရရနျ အခှငျ့အရေး မြားပါသညျ။
အရကျကို အဆကျမပွတျ သောကျသုံးသောသူသညျ ကိုယျခံအားပြော့သှားပွီး တီဘီရောဂါကူးစကျခံရရနျ အခှငျ့အရေး ပိုလာပါသညျ။ ဆေးလိပျ သောကျသောသူသညျ တီဘီရောဂါ ကူးစကျခံရရနျ အခှငျ့အရေး အလှနျမြားပါသညျ။
(၄) အလုပျအကိုငျနှငျ့ နရောဒသေ
ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားသညျ တီဘီရောဂါရှငျမြားနှငျ့ ထိတှဆေ့ကျဆံရသညျ့ အတှကျ ရောဂါကူးစကျခံရဖို့ အခှငျ့အရေးမြားပါသညျ။ နှာခေါငျးစညျး တပျဆငျခွငျး၊ မကွာခဏ လကျဆေးခွငျးတို့ဖွငျ့ ကူးစကျခံရမညျ့ ရာခိုငျနှုနျးကို လြှော့ခနြိုငျပါသညျ။
ထောငျတှငျးအကဉျြးသားမြား၊ ရှပွေ့ောငျး နထေိုငျသူမြား၊ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရေး ဂဟောမြား၊ ဒုက်ခသညျစခနျးမြား စသညျ့ လူစုလူဝေးဖွငျ့ စုပေါငျးနထေိုငျရသညျ့ နရောမြားတှငျ တီဘီရောဂါပိုး ကူးစကျခံရရနျ အခှငျ့အရေး မြားပါသညျ။
“ #တီဘီရောဂါနောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြား ”
*ကုသမှု မခံယူပါက တီဘီရောဂါသညျ သစေနေိုငျသော ရောဂါဖွဈပါသညျ။
ရောဂါလက်ခဏာ ပွနသေော တီဘီလူနာသညျ ကုသမှု မခံယူပါက အဆုတျကို
ပကျြစီးစနေိုငျပါသညျ။ ထို့နောကျ တီဘီပိုးမြားသညျ သှေးမှတဈဆငျ့ အခွားသော ကိုယျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးမြားသို့ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိသှားပါသညျ။ တီဘီပိုးသညျ အရိုးသို့ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိသောအခါ ကြောရိုးအတှငျး နာကငျြခွငျး၊ ကြောရိုးဆဈမြား ပကျြစီးခွငျးတို့ကို ခံစားရပါသညျ။ အခြို့သောသူမြားတှငျ နံရိုးမြား၌ တီဘီပိုး ဖကျြဆီးခွငျး ခံရတတျပါသညျ။
*တီဘီပိုးသညျ ဦးနှောကျသို့ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိသောအခါ ဦးနှောကျမွှေးရောငျခွငျး
ကိုခံစားရပါသညျ။ ဦးနှောကျအမွှေးရောငျပွီး အရညျမြားဖွငျ့ စုဖောငျးလာသောအခါ အသကျ သဆေုံးစနေိုငျပါသညျ။ ကြောကျကပျနှငျ့ အသညျးသညျ ကိုယျခန်ဓာမှ
နစေ့ဉျ ထှကျရှိလာသော အဆိပျအတောကျမြားကို ဖယျထုတျ သနျ့စငျပေးရပါသညျ။
*ကြောကျကပျနှငျ့ အသညျးသို့ တီဘီပိုး ပြံ့နှံ့ ရောကျရှိပွီး ပကျြစီးစသေောအခါ
ခန်ဓာကိုယျမှ နစေ့ဉျထှကျရှိသော အဆိပျအတောကျမြားသညျ ခန်ဓာကိုယျ အတှငျး၌
စုပုံကာ ရောဂါမြိုးစုံကို ခံစားရစပေါသညျ။ တီဘီရောဂါပိုးသညျ နှလုံးကို ဝနျးရံထားသညျ့ တဈရှူးမြားထံသို့ ပြံ့နှံ့ရောကျရှိနိုငျပါသညျ။ နှလုံး ပတျဝနျးကငျြရှိ တဈရှူးမြားသညျ တီဘီရောဂါပိုးကွောငျ့ ရောငျရမျးလာသညျ့အခါ နှလုံး ပတျဝနျးကငျြတှငျ အရညျဓာတျမြား စုပုံလာပါသညျ။
*၄ငျးစုပုံလာသော အရညျဓာတျမြားသညျ နှလုံးအား မညှဈနိုငျအောငျ ဖိထားသကဲ့ သို့ ဖွဈနသေညျ့အတှကျ အခြိနျကွာလာသောအခါ နှလုံးရပျပွီး သဆေုံးနိုငျပါသညျ။
“ #စမျးသပျစဈဆေးမှုမြား ”
*တီဘီရောဂါရှိကွောငျး သခြောစရေနျ အတှကျ စမျးသပျ စဈဆေးရာတှငျ
အောကျပါ စမျးသပျ စဈဆေးမှုမြား ပါဝငျပါသညျ။
*ဘကျတီရီးယားပိုး အုပျစုဝငျဖွဈသော တီဘီရောဂါပိုးကို ကုသရာတှငျ အခွားသော ဘကျတီးရီးယားပိုးမြားကို ကုသခွငျးထကျ အခြိနျပိုကွာပါသညျ။သောကျဆေးဖွငျ့ ကုသရ ပါသညျ။ ပဋိဇီဝ သောကျဆေးမြားကို အနညျးဆုံး ၆ လမှ ၉ လ အထိ သောကျရ လရှေိ့ပါ သညျ။
*တီဘီ ရောဂါရှငျ၏ အသကျအရှယျ၊ ကနျြးမာရေး အခွအေနေ၊ မတိုးတော့သော
ဆေးဝါးမြား၊ တီဘီရောဂါ အမြိုးအစားနှငျ့ တီဘီ ရောဂါ ဖွဈသညျ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျး တို့အပျေါ မူတညျကာ သောကျရမညျ့ ဆေးပမာဏ၊ သောကျရမညျ့ ကာလ အပိုငျးအခွားတို့ ကှဲပွားခွားနားသှားပါသညျ။ ရောဂါလက်ခဏာ မပွသေးသော တီဘီလူနာမြားသညျ တီဘီဆေး အမြိုးအစားတဈမြိုးတညျးကို သောကျသုံးရုံဖွငျ့ လုံလောကျနိုငျပါသညျ။ ရောဂါလက်ခဏာပွသညျ့ တီဘီလူနာမြားတှငျမူ တဈခါ သောကျလြှငျ တီဘီဆေး တဈမြိုးထကျပိုကာ သောကျရလရှေိ့ပွီး ဆေးယဉျ တီဘီ လူနာမြားတှငျမူ အမြိုးအစား ပိုမိုသောကျရလေ့ ရှိပါသညျ။ အသုံး အမြားဆုံးသော တီဘီဆေးမြားမှာ-
(၄) Pyrazinamide တို့ ဖွဈကွပါသညျ။
*တီဘီဆေးမြားတှငျ အခွားသော ဆေးမြား နညျးတူ ဘေးထှကျဆိုးကြိုး ရှိပါသညျ ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကို မပွတတျသျောလညျး ဘေးထှကျဆိုးကြိုးခံစား ရပွီ ဆိုပါက ပွငျးထနျနိုငျပါသညျ။ တီဘီဆေး သောကျသုံးနစေဉျအတှငျး-
(၅) အကွောငျးအရငျး မသိဘဲ သုံးရကျထကျ ပိုဖြားခွငျး စသညျတို့ကို ခံစားရပါက ဆရာဝနျနှငျ့ အမွနျဆုံး တှဆေုံ့သငျ့ပါသညျ။
*တီဘီဆေး သောကျသုံးပွီး ရကျ သတ်တပတျ နှဈပတျကြျော ကွာလာသောအခါ သူတဈပါးသို့ တီဘီရောဂါ မကူးစကျနိုငျတော့ပါ။ ထို့ပွငျ ရောဂါလက်ခဏာမြား သကျသာသှားပွီး နရေထိုငျရသညျမှာ သကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈလာပါသညျ။ ဤအခြိနျသညျ အလှနျအရေးကွီးပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော တီဘီလူနာ သညျ နထေိုငျကောငျးလာပွီး တီဘီဆေးကို ဆကျမသောကျလိုတော့သညျ့ စိတျဆန်ဒ ဖွဈပျေါလာတတျသောကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။
*တီဘီဆေးအမြိုးအစား အားလုံးကို သတျမှတျထားသညျ့ ကာလ ပွညျ့မီအောငျ တိတိကကြ သောကျဖို့ အလှနျအရေးကွီးပါသညျ။ တီဘီဆေး သောကျခွငျးကို ရပျခြိနျ မတိုငျမီ ရပျခွငျးနှငျ့ တီဘီဆေးကို အခြိနျမှနျမှနျ မသောကျမိခွငျးမြားကွောငျ့ တီဘီပိုးကို ဆေးယဉျတီဘီပိုးအဖွဈသို့ ရောကျရှိစပေါသညျ။ ဆေးယဉျတီဘီ
ဖွဈပွီဆိုပါက ဆေးမတိုးတော့ဘဲ ပိုမိုအန်တရာယျရှိပွီး ပိုမိုကုသရ ခကျခဲသော တီဘီပိုးအဖွဈသို့ ရောကျရှိသှားပွီ ဖွဈပါသညျ။
*တီဘီဆေးသောကျဖို့ မမစေ့ရေနျ အတှကျ အစီအစဉျမြား ခမြှတျဆောငျရှကျ လကျြရှိရာ လူနာကို နစေ့ဉျ တိုကျရိုကျတှထေိ့ဆေးတိုကျသော စနဈ (DOTS) ကို ကငျြ့သုံးရလေ့ ရှိပါသညျ။
“ #တီဘီရောဂါအားကွိုတငျကာကှယျခွငျး ”
*တီဘီရောဂါ လက်ခဏာ မပွသေးသျောလညျး စမျးသပျ စဈဆေးခကျြမြား အရ တီဘီပိုး ကူးစကျခံရသညျဟု တှရှေိ့ရပါက ရောဂါလက်ခဏာ ပွသညျ့ အဆငျ့သို့ မရောကျစအေောငျ ဆေးဝါးမြား ကွိုတငျ သောကျသုံးထားဖို့ လိုအပျပါသညျ။ ရောဂါ လက်ခဏာ ပွမှ အခွားသူမြားသို့ ရောဂါ ကူးစကျနိုငျမညျ ဖွဈသောကွောငျ့ ရောဂါ လက်ခဏာ မပွအောငျ ဆေးဝါးမြား သောကျသုံးခွငျးဖွငျ့ တီဘီလူနာ၏ ပတျဝနျးကငျြမှ သူမြားကို တီဘီရောဂါ မကူးစကျအောငျ ကာကှယျထားနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
*အကယျ၍ တီဘီရောဂါ လက်ခဏာပွသော တီဘီလူနာ ဖွဈပါက အခွားသူမြားသို့ မကူးစကျ နိုငျသညျ အထိ ဆေးဝါးမြား သောကျသုံးနစေဉျ အတှငျး အောကျပါ အခကျြမြားကို ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ တီဘီလူနာ ပတျဝနျးကငျြမှ သူမြားကို ကူးစကျမှု လြော့နညျးအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျမညျ ဖွဈပါသညျ။
(၁) အိမျမှာ နပေါ။
လူထူ ထပျသညျ့ နရောမြား ဖွဈသော အလုပျ၊ ကြောငျး စသညျတို့ကို မသှားဘဲ တဈသီးတဈသနျ့ နထေိုငျခွငျးဖွငျ့ အခွားသူကို ကူးစကျမှု လြှော့ခနြိုငျပါသညျ။
(၂) လဝေငျ လထှေကျ ကောငျးပါစေ။
အလုံပိတျ အခနျးအတှငျး နထေိုငျခွငျးဖွငျ့ အခနျးထဲတှငျ တီဘီရောဂါပိုးမြား ပိုမို သိပျသညျးစှာ ပြံ့နှံ့နနေိုငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အခနျးအား လဝေငျလထှေကျ
ကောငျးအောငျ တံခါးခပျြမြား ဖှငျ့ဟ ထားသငျ့ပါသညျ။ တံခါးဖှငျ့ပွီး ပနျကာ ဖှငျ့ထားပါက ပိုမို ထိရောကျမှု ရှိပါသညျ။
(၃) ပါးစပျကို ကာကှယျထားပါ။
တီဘီလူနာ ရယျမောသောအခါ၊ နှာခသြေောအခါ၊ ခြောငျးဆိုးသောအခါ တဈရှူးသို့မဟုတျ လကျကိုငျပဝါ ဖွငျ့ ပါးစပျကို ဖုံးအုပျထားရပါမညျ။ ထို့နောကျ လုံအောငျပိတျကာ စှနျ့ပဈရပါမညျ။
(၄) နှာခေါငျးစညျး စညျးပါ။
ခှဲစိတျခနျးမြားတှငျ အသုံးပွုသညျ့ နှာခေါငျးစညျးကဲ့သို့ နှာခေါငျးနှငျ့ ပါးစပျကို လုံအောငျ ကာကှယျနိုငျသညျ့ နှာခေါငျးစညျးမြား စညျးထားသငျ့ပါသညျ။ တဈခါ သုံး နှာခေါငျးစညျးမြားကို ဈေးပေါပေါဖွငျ့ ဝယျယူ ရရှိနိုငျပါသညျ။
*အထကျပါ အခကျြမြားကို ဆောငျရှကျရမညျ့ အပွငျ တီဘီလူနာသညျ ဆေးကို သတျမှတျရကျ ရောကျသညျအထိ အပွညျ့ သောကျရပါမညျ။ ဆေးကို လိပျပတျ လညျအောငျ သောကျခွငျးသညျ တီဘီလူနာ နှငျ့တကှ ဘေးပတျဝနျးကငျြရှိ
လူမြား အားလုံးကို ကောငျးကြိုး ဖွဈစပေါသညျ။ ကလေးသူငယျမြားတှငျ
ပွငျးထနျသော တီဘီရောဂါ မဖွဈပှားစရေနျ အတှကျ တီဘီရောဂါ ကာကှယျဆေး ထိုးထားသငျ့ပါသညျ။
*သတိပွုရနျမှာ BCG ကာကှယျဆေးသညျ ကလေးသူငယျ မြားတှငျသာ အာနိသငျ ထိရောကျမှု ရှိပွီး လူကွီးမြားတှငျ အာနိသငျ အပွညျ့အဝ မရရှိသောကွောငျ့ လူကွီးမြားတှငျ ကာကှယျဆေး အနနှေငျ့ အသုံးမပွုသငျ့ပါ။
*ပိုမိုအစှမျးထကျသော တီဘီရောဂါ ကာကှယျဆေးမြား ရရှိရနျအတှကျ
သိပ်ပံပညာရှငျမြားက သုတသေန ပွုလုပျလြှကျ ရှိပါသညျ။ ပရိသတျမြား
ကွောကျမကျဖှယျ ကောငျးသော တီဘီရောဂါအန်တရာယျမှ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ။
Author admin 1Posted on January 29, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​တီဘီရောဂါ_ဆိုသည်မှာ
*အသက်အရွယ်မရွေးမကြာခဏစားသုံး ပေးသင့်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက် အကူပြုသောဒန့်သလွန်အကြောင်းကို မြဝတီ စာဖတ် ပရိသတ်များ သိရှိစေရန် အတွက် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် (FAME) နှင့် မြဝတီအဖွဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်tkw-
#မေး။ ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ မကြာခဏဆိုသလို နှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးလေ့ရှိတဲ့ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းခါးတို့၊ ဒန့်သလွန်သီးတို့ရဲ့ အပင်ဟာ ဘယ်လိုမျိုးအပင်လည်း ဆိုတာ အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ဒန့်သလွန်ပင်ကို ရုက္ခဗေဒအရ Moringa oleifera လို့ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် လိုကတော့ Horseradish tree ဒါမှမဟုတ် Drumstick tree လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ဒန့်သလွန်ပင်ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာ လူမျိုးအတော်များများ မြင်ဖူးကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ သူဟာအပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး ဆရာတို့ မြန်မာနိုင်ငံလို Tropical weather ရှိတဲ့ ဒေ သတွေ မှာ ကောင်းကောင်းပေါက်ရောက် ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်းဒေသကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအတော် များများမှာ စိုက်လို့ရပါတယ်။ ဆရာတို့ရဲ့ ပြင်ဦးလွင်ခြံမှာ အပင် ၂၂ဝ စိုက်ထားပါတယ်။ သူဟာရေကြိုက်ပေမယ့် ရေဝပ်တာ တော့မကြိုက်ပါဘူး။ မြေကြီးရဲ့ စံကတော့ စံ ၆ ဒသမ ၃ ကနေ စံ ၇ ဒသမ သုညကို ကြိုက် ပါတယ်။ စတင်စိုက်ပျိုးတဲ့ အချိန်က နေစပြီး နှစ်နှစ်သား ဆိုရင်စပြီး အသီးတွေ အရွက်တွေ ခူးလို့ရပါပြီ။ အာဟာရ တန်ဖိုးမြင့်မားပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သဘာဝ ဆေးပညာအရ တစ်နေ့တခြား ရေပန်းစားလာတဲ့ အပင် ဖြစ်ပါတယ်။
#မေး။ ။ ဒန့်သလွန်အရွက်မှာ ဘယ်လိုမျိုး အာဟာရဓာတ်တွေပါသလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ဒန့်သလွန်တစ်ပင်လုံးမှာ အာဟာရ ဓာတ်ပါဝင်မှု အများဆုံးကတော့ အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေလည်း အတော်များများ ပါဝင်နေ တာ တွေ့ရပါတယ်။
(က) ပရိုတင်းဓာတ်- အမိုင်နိုအက်စစ် အတော်များများ ပါဝင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာ ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Essential Amino Acid တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ သက်သတ်လွတ်စားတဲ့သူ တွေဟာ ပရိုတင်းဓာတ်မချို့တဲ့ရ လေအောင် ဒန့်သလွန်ရွက်တွေကို မကြာခဏ စားပေးသင့်ပါတယ်။အရွက်စုစုပေါင်းအလေးချိန်ရဲ့ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တော့ အရွက်ထဲမှာ တော့ အတော်လေး များတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
(ခ) ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်- စုစုပေါင်း အလေးချိန်ရဲ့ ၈ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင် နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခွန် အားကိုပြည့်ဖြိုးစေပြီး သက်လုံ
(ဂ) ဗီတာမင်အနေနဲ့ အရွက်အစို ၁ဝဝ ဂရမ်စားခဲ့ရင် ဗီတာမင်စီက ၅၁ ဒသမ ၇ဝ မီလီဂရမ်ရရှိပြီး ဗီတာ မင်ထဲမှာတော့ အများဆုံးပါဝင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ဗီတာမင်အနေနဲ့ နိုင်ယာစင် (B3) က၂ ဒသမ၂ မီလီဂရမ် နဲ့ ဘီစစ် ၁ ဒသမ ၂ မီလီဂရမ် တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တခြား ဗီတာမင်တွေလည်း နည်းနည်းစီ ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
(ဃ) သတ္တုဓာတ်အနေနဲ့ အများဆုံး ပါဝင်တာက ပိုတက်စီယမ်ဖြစ်ပြီး အရွက်အစို ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ၃၃၇ မီလီဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒုတိယ အနေနဲ့ ကယ်ဆီယမ်က ၁၈၅ မီလီဂရမ်၊ တတိယအနေနဲ့ မဂ္ဂနီ စီယမ် ၁၄၇ မီလီဂရမ် ပါဝင်ပါ တယ်။
(င) နောက်ဆုံးအရေးအကြီးဆုံးပါဝင် တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကတော့ Phytochemicals လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းတွေကတော့ ကင်ဆာရောဂါ ကိုကာကွယ် တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Thiocarbamate နဲ့ Iso-thiocyanate ရောဂါပိုးမွှားတွေ ကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Glucosinolate နဲ့ Pterygospermin သွေးကြောတွေကို ကောင်း မွန်အောင် ပြုလုပ် ပေးတဲ့ Quercetin နဲ့ Rutin အင်တီအောက်ဆီဒင့် အာနိသင်ပေးတဲ့ Kaempferol နဲ့ Chlorogenic acid အစရှိတဲ့ ဓာတ် ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
#မေး။ ။ အရွက်မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ် တွေဟာ ချက်ပြုတ်လိုက်ရင် ဆုံးရှုံးမှုရှိ ပါသလား။ ဟင်းခါးလုပ်သောက်ကြတာ မှာရော အပူကြာကြာ ပေးမိရင် အာဟာရ ဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်ပါသလား ဆရာ။
ဖြေ။ ။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒန့်သလွန် ရွက်ဟာ ရေသေသေချာချာဆေးပြီး ဟင်းခါးလုပ်သောက်လေ့ရှိတော့ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးမှု ရှိ/မရှိ ပညာရှင် တွေလေ့လာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဟင်းခါးကို ပထမအကြိမ် ချက်စဉ်မှာ အပူချိန်ကို ကြာကြာ မပေးဘဲ ရေပွက်ပွက်ဆူပြီး ၁ဝ မိနစ်လောက် အကြာမှာ စားမယ်ဆိုရင် အာဟာရဓာတ် အပြည့်အဝနီးပါး ရရှိပါတယ်။
ဆက်ပြီးအပူပေးထားရင်တော့ တချို့သော အာဟာရဓာတ်တွေဟာ အပူကြောင့် ပျက်စီး သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဗီတာမင်စီ လိုမျိုးဟာ အပူပေးချိန်ကြာလေလေ ပိုပျက်စီး လေဖြစ်တော့ မီးဖိုပေါ်မှာအကြာကြီး အပူ မပေးသင့်ပါဘူး။ စားလို့ရတဲ့ အတိုင်းအတာကိုသာ အပူပေးသင့် ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ပြန်စားရင်လည်း ပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထိ အပူပြန် မပေးဘဲစားလို့ကောင်းရုံ ခပ်နွေးနွေးသာအပူ ပေးပြီးစားရပါမယ်။
#မေး။ ။ အဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်နဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်တွေဟာ အရွက်မှာပဲ ပါတာပါလားဆရာ။ တခြားအစိတ်အပိုင်း တွေဖြစ်တဲ့ ဒန့်သလွန်သီးတို့ အသီးထဲမှာပါတဲ့ အစေ့တွေမှာရော ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ သိချင် ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒန့်သလွန်တစ်ပင်လုံးကတော့ ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေစားသုံးလေ့ရှိတာကတော့ အရွက်နဲ့ အသီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသီးကို စားမယ်ဆိုရင်လည်း အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှု နဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းပါဝင်မှုကတော့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးစားရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ပမာဏကတော့ အနည်း အများရှိပါတယ်။ ဥပမာ- ဗီတာမင်စီပါဝင်မှု ကို နှိုင်းယှဉ်ရင် အရွက် ၁ဝဝ ဂရမ်မှာ ဗီတာ မင်စီ ၅၁ ဒသမ ၇ဝ မီလီဂရမ်ပါပေမယ့် အသီးရဲ့အနှစ်မှာ ၁၄၁ မီလီဂရမ်ပါဝင် ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ပိုပါတယ်ပေါ့။
ပိုတက်စီယမ်ဆိုရင် အရွက်မှာ ၃၃၇ မီလီ ဂရမ်ပါဝင်ပြီး အသီးမှာ ၄၆၁ မီလီဂရမ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရိုတင်းပါဝင်မှုကျတော့ အရွက်ကပိုများပြန်ရော။ အရွက်မှာ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပြီး အစေ့ကျတော့ ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာပါဝင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အစေ့တို့၊ အမြစ်တို့၊ ပင်စည်တို့ဟာလည်းဆေးဖက်ဝင် ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
#မေး။ ။ ဒန့်သလွန်အရွက်ကိုစားရင် ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း သိပါရစေဆရာ။
ဖြေ။ ။ ဒန့်သလွန်ရွက်ကို မကြာခဏ စားရင်ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး တွေကတော့ အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရေး ပါတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအနေနဲ့ကတော့-
(၁) အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
(၂) ရောဂါပိုးများ နှိမ်နင်းနိုင်ခြင်း၊
(၃) ကင်ဆာရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
(၄) သွေးတိုးနှင့် နှလုံးရောဂါများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
(၅) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ သက်သာစေခြင်း၊
#မေး။ ။ အာဟာရချို့တဲ့မှုကနေ ဘယ်လိုများ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသလဲဆရာ။
ဖြေ။ ။ခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟာ အာဟာရဓာတ်မြင့်မားစွာပါတဲ့ အတွက် မှန်မှန်စားခဲ့ရင် အာဟာရဓာတ်မချို့ တဲ့အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့နေရာမှာ များစွာ အထောက် အကူပြုပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေဟာ ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ အတွက်များစွာ အကျိုးရှိလှပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အခုအခါမှာ အာဟာရဓာတ် ချို့တဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ ဒန့်သလွန်ပင်တွေ စိုက်ပျိုးပြီး လူတွေစားသုံးဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မှာရှိတဲ့ Chlorogenic acidရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အာဖရိကမှာရှိတဲ့ အာဟာရချို့တဲ့မှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟာ အသင့်လျော်ဆုံး လို့ဆိုပါတယ်။ အပင် ၁၈ မျိုးကို လေ့လာရာမှာ ဒန့် သလွန်ပင်က အကောင်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။
#မေး။ ။ ရောဂါပိုးမွှားတွေ နှိမ်နင်းနိုင်တယ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးရောဂါပိုးတွေကိုနှိမ်နင်း ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ဒန့်သလွန်ရွက်၊ ဒန့်သလွန်စေ့နဲ့ အပင်ရဲ့အခေါက်နဲ့ အမြစ်တွေရဲ့ ပြုတ်ရေကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်ချက်အရ ဗက်တီး ရီးယား အတော်များများကို သေစေနိုင်တယ် ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မှိုတချို့နဲ့ သန်ကောင်တွေကိုလည်း သေစေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေကတော့ Isothiocyanate ၊ Glucosinolate eJY Pterygospermin တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဗက်တီး ရီးယားပိုးတွေ၊ မှိုစွဲနာတွေ၊ သန်ကောင် ရောဂါတွေရှိခဲ့ရင် ဒန့်သလွန် ရွက်ကို ဟင်းခါး ချက်စားခဲ့ရင် အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ် လိုမှသာ Antibiotic တွေသောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တဲ့ရောဂါအတွက် ထိရောက်တဲ့ သဘာဝအစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကလေ့လာချက်တွေအရ ဒန့် သလွန်ပင်ရဲ့အခေါက်ကနေ ထုတ်ယူရရှိတဲ့ အယ်ကာလွိုက် နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Moringine နဲ့ Moringinine တွေဟာလည်းပဲ ဗက်တီး ရီးယားပိုးတွေ (both Gram-positive and Gram-negative ) နဲ့ မှိုစွဲနာတွေကို ပျောက်ကင်း စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
#မေး။ ။ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအာနိသင်ကိုလည်း ရှင်းပြပေးပါဆရာ။
ဖြေ။ ။ သဘာဝသစ်သီးသစ်ရွက်တွေမှာ ကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်တားဆီးနိုင် တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ သိရှိဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ရဲ့ အဆို အရ ဒန့်သလွန်ရွက်မှာ ကင်ဆာရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Thiocarbamate ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းနဲ့ Isothiocyanate ဆိုတဲ့ဓာတ် ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပြီး သူတို့ဟာ ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့ လာတွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် Adenocarcinoma အမျိုးအစားကို ကာကွယ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒန့်သလွန်ပင်အမြစ်ကရတဲ့ အဆီအနှစ်တွေက ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုတယ်လို့ ကိုရီးယား တက္ကသိုလ် တစ်ခုရဲ့ လေ့လာချက်အရ သိရပါ တယ်။
#မေး။ ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ သွေးတိုးရောဂါရှိသူ တွေစားရင်ရော ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရှိပါ သလဲဆရာ။
ဖြေ။ ။ ဒန့်သလွန်ရွက် ဟာသွေးထဲမှာရှိတဲ့ အဆီပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စထရောကိုချပေး တဲ့အတွက် နှလုံးရော ဂါ၊ သွေး တိုးရောဂါ ဝေဒနာသည်တွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူကဆီးရွှင်စေတဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့ အတွက် သွေးပေါင်ချိန်ကျစေဖို့ အထောက် အကူပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒန့်သလွန်ရွက်ကို သွေးပေါင်ကျ နေသူတွေအနေနဲ့ များများ မစားသင့်ပါဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက အကြံပြု ထားပါတယ်။ အရွက်သာမကဘဲ ဒန့်သလွန် ပင်ရဲ့ကျန်အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အသီး၊ အစေ့၊ အခေါက်နဲ့ အမြစ်တွေမှာလည်း အခုလိုအာနိသင်တွေ ရှိပါတယ်။
#မေး။ ။ ဆီးချိုသွေးချိုကျစေတဲ့အာနိသင် အကြောင်းလဲဆက်ပြောပါဦးဆရာ။
ဖြေ။ ။ ဒါတော့သိပ်မဆန်းပါဘူး။ သဘာဝ ဆေးပင်အရွက်တွေ အတော်များများဟာ ဆီးချိုသွေးချိုကိုထိန်းသိမ်းရာမှာ များစွာ အထောက် အကူပြုကြောင်း သိခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ ဒန့်သလွန်ရွက်ဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒန့်သလွန် ရွက်မှာပါတဲ့ တာပင်းနွိုက်တွေဟာ ပန်ကရိယမှာရှိတဲ့ အင်ဆူလင်ထုတ်ပေးတဲ့ ဘီတာ ဆဲလ်တွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒန့်သလွန် ဟင်းခါး သောက်ပြီးရင် သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ဂလူးကို့စ်ပမာဏ လျော့နည်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုသမားတွေ စားသုံးရင်အကျိုးရှိပါတယ်။
#မေး။ ။ တခြားအထွေထွေအာနိသင်တွေ ကရော ဘာတွေများရှိပါသလဲဆရာ။
ဖြေ။ ။ တခြားကျန်းမာရေးအထောက် အကူပြု အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီထဲကအရေးကြီးတာတွေကို ပြောရရင်-
– အရောင်ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတော့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်တာကိုလျော့နည်းစေပါတယ်။
. အင်တီအောက်ဆီဒင့်အာနိသင်ပေး ပါတယ်။
. အသည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပိုကောင်းစေပါတယ်။ အသည်းရောင်တာ၊ အသည်းခြောက်တာတွေ မဖြစ် အောင်ကာကွယ် ပေးပါတယ်။
. ကျောက်ကပ်မှာကျောက်မတည်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
#မေး။ ။ ဒန့်သလွန်ရွက်မဟုတ်ဘဲ အသီး ကိုစားရင်ရော အခုလိုအာနိသင်တွေ ရနိုင်ပါ သလားဆရာ။
ဖြေ။ ။ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အရွက်က တော့ အစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အသီးရဲ့ အထဲမှာရှိတဲ့ အနှစ်ကိုပဲစားစား၊ အစေ့ကိုပဲ စားစား၊ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အာနိသင်တွေရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့အာနိသင်အနည်း အများတော့ ကွာခြားမှုရှိတာပေါ့။
#မေး။ ။ ဆရာ့အနေနဲ့ မြဝတီစာဖတ် ပရိသတ်ကြီးကို ဘာများပြောချင်ပါသေး လဲဆရာ။
ဖြေ။ ။ အိမ်နောက်ဖေးမှာ မြေလွတ်ရှိတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ ဒန့်သလွန်ပင်ကို စိုက်ပျိုးကြ ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာသုံးဖို့ မလိုလို့ အော်ဂဲ နစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်ငွေ တိုးစေပါတယ်။ အိမ်မှာ ဟင်းချက်စားပြီး ပိုတာရောင်းလို့ အလွယ် တကူရတော့ ၁ဝ ပင်လောက် စိုက်ထားရင်ကို ဟင်းရံအတွက် ပူစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့။ အာလူးနဲ့ ရောချက်ပြီး ကလေးတွေကို ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဒန့်သလွန်သီးဟာ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံမှာ ပေါပေါများများရရှိနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း လည်းချိုသာတာကြောင့် အသက်အရွယ်
မရွေးမကြာခဏ စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ဟင်းလျာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်လို့ သတင်းကောင်း ပြောကြားပါရစေ။ ။
#CREDIT – မြဝတီ
*အသကျအရှယျမရှေးမကွာခဏစားသုံး ပေးသငျ့ပွီး ကနျြးမာရေးကိုမြားစှာအထောကျ အကူပွုသောဒနျ့သလှနျအကွောငျးကို မွဝတီ စာဖတျ ပရိသတျမြား သိရှိစရေနျ အတှကျ ဒေါကျတာခငျမောငျလှငျ (FAME) နှငျ့ မွဝတီအဖှဲ့တှဆေုံ့မေးမွနျးမှုကို ဖျောပွလိုကျရပါသညျtkw-
#မေး။ ။ ကြှနျတျောတို့မွနျမာလူမြိုးတှေ မကွာခဏဆိုသလို နှဈခွိုကျစှာစားသုံးလရှေိ့တဲ့ ဒနျ့သလှနျရှကျဟငျးခါးတို့၊ ဒနျ့သလှနျသီးတို့ရဲ့ အပငျဟာ ဘယျလိုမြိုးအပငျလညျး ဆိုတာ အရငျဆုံးရှငျးပွပေးပါခငျဗြာ။
ဖွေ။ ။ ဒနျ့သလှနျပငျကို ရုက်ခဗဒေအရ Moringa oleifera လို့ချေါပါတယျ။ အင်ျဂလိပျ လိုကတော့ Horseradish tree ဒါမှမဟုတျ Drumstick tree လို့ချေါကွပါတယျ။
ဒနျ့သလှနျပငျကိုတော့ ကြှနျတျောတို့မွနျမာ လူမြိုးအတျောမြားမြား မွငျဖူးကွပွီးဖွဈမှာပါ။ သူဟာအပငျကွီးမြိုးဖွဈပွီး ဆရာတို့ မွနျမာနိုငျငံလို Tropical weather ရှိတဲ့ ဒေ သတှေ မှာ ကောငျးကောငျးပေါကျရောကျ ပါတယျ။ သူ့ရဲ့မူရငျးဒသေကတော့ အိန်ဒိယ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ဒသေအတျော မြားမြားမှာ စိုကျလို့ရပါတယျ။ ဆရာတို့ရဲ့ ပွငျဦးလှငျခွံမှာ အပငျ ၂၂ဝ စိုကျထားပါတယျ။ သူဟာရကွေိုကျပမေယျ့ ရဝေပျတာ တော့မကွိုကျပါဘူး။ မွကွေီးရဲ့ စံကတော့ စံ ၆ ဒသမ ၃ ကနေ စံ ၇ ဒသမ သုညကို ကွိုကျ ပါတယျ။ စတငျစိုကျပြိုးတဲ့ အခြိနျက နစေပွီး နှဈနှဈသား ဆိုရငျစပွီး အသီးတှေ အရှကျတှေ ခူးလို့ရပါပွီ။ အာဟာရ တနျဖိုးမွငျ့မားပွီး ဆေးဖကျဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ သဘာဝ ဆေးပညာအရ တဈနတေ့ခွား ရပေနျးစားလာတဲ့ အပငျ ဖွဈပါတယျ။
#မေး။ ။ ဒနျ့သလှနျအရှကျမှာ ဘယျလိုမြိုး အာဟာရဓာတျတှပေါသလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖွေ။ ။ဒနျ့သလှနျတဈပငျလုံးမှာ အာဟာရ ဓာတျပါဝငျမှု အမြားဆုံးကတော့ အရှကျဖွဈပါတယျ။ ဆေးဖကျဝငျအာနိသငျတှလေညျး အတျောမြားမြား ပါဝငျနေ တာ တှရေ့ပါတယျ။
(က) ပရိုတငျးဓာတျ- အမိုငျနိုအကျစဈ အတျောမြားမြား ပါဝငျပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာ ရေးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ Essential Amino Acid တှေ မြားစှာပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မို့လို့ သကျသတျလှတျစားတဲ့သူ တှဟော ပရိုတငျးဓာတျမခြို့တဲ့ရ လအေောငျ ဒနျ့သလှနျရှကျတှကေို မကွာခဏ စားပေးသငျ့ပါတယျ။အရှကျစုစုပေါငျးအလေးခြိနျရဲ့ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျတော့ အရှကျထဲမှာ တော့ အတျောလေး မြားတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။
(ခ) ကာဘိုဟိုကျဒရိတျ- စုစုပေါငျး အလေးခြိနျရဲ့ ၈ ဒသမ ၂၈ ရာခိုငျ နှုနျးပါဝငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခှနျ အားကိုပွညျ့ဖွိုးစပွေီး သကျလုံ
(ဂ) ဗီတာမငျအနနေဲ့ အရှကျအစို ၁ဝဝ ဂရမျစားခဲ့ရငျ ဗီတာမငျစီက ၅၁ ဒသမ ၇ဝ မီလီဂရမျရရှိပွီး ဗီတာ မငျထဲမှာတော့ အမြားဆုံးပါဝငျမှု ဖွဈပါတယျ။ ကနျြဗီတာမငျအနနေဲ့ နိုငျယာစငျ (B3) က၂ ဒသမ၂ မီလီဂရမျ နဲ့ ဘီစဈ ၁ ဒသမ ၂ မီလီဂရမျ တို့ပါဝငျပါတယျ။ တခွား ဗီတာမငျတှလေညျး နညျးနညျးစီ ပါဝငျနပေါသေးတယျ။
(ဃ) သတ်တုဓာတျအနနေဲ့ အမြားဆုံး ပါဝငျတာက ပိုတကျစီယမျဖွဈပွီး အရှကျအစို ၁ဝဝ ဂရမျမှာ ၃၃၇ မီလီဂရမျပါဝငျပါတယျ။ ဒုတိယ အနနေဲ့ ကယျဆီယမျက ၁၈၅ မီလီဂရမျ၊ တတိယအနနေဲ့ မဂ်ဂနီ စီယမျ ၁၄၇ မီလီဂရမျ ပါဝငျပါ တယျ။
(င) နောကျဆုံးအရေးအကွီးဆုံးပါဝငျ တဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှကေတော့ Phytochemicals လို့ချေါတဲ့ ဆေးဖကျဝငျ ဓာတျပစ်စညျးတှေ ဖွဈပါတယျ။
အရှကျမှာ ပါဝငျတဲ့ ဆေးဖကျဝငျ ပစ်စညျးတှကေတော့ ကငျဆာရောဂါ ကိုကာကှယျ တိုကျဖကျြနိုငျစှမျးရှိတဲ့ Thiocarbamate နဲ့ Iso-thiocyanate ရောဂါပိုးမှားတှေ ကို တိုကျခိုကျနိုငျစှမျးရှိတဲ့ Glucosinolate နဲ့ Pterygospermin သှေးကွောတှကေို ကောငျး မှနျအောငျ ပွုလုပျ ပေးတဲ့ Quercetin နဲ့ Rutin အငျတီအောကျဆီဒငျ့ အာနိသငျပေးတဲ့ Kaempferol နဲ့ Chlorogenic acid အစရှိတဲ့ ဓာတျ ပစ်စညျးတှေ ပါဝငျနပေါတယျ။
#မေး။ ။ အရှကျမှာပါဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျ တှဟော ခကျြပွုတျလိုကျရငျ ဆုံးရှုံးမှုရှိ ပါသလား။ ဟငျးခါးလုပျသောကျကွတာ မှာရော အပူကွာကွာ ပေးမိရငျ အာဟာရ ဓာတျဆုံးရှုံးမှုရှိနိုငျပါသလား ဆရာ။
ဖွေ။ ။ သာမနျအားဖွငျ့တော့ ဒနျ့သလှနျ ရှကျဟာ ရသေသေခြောခြာဆေးပွီး ဟငျးခါးလုပျသောကျလရှေိ့တော့ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ ဆုံးရှုံးမှု ရှိ/မရှိ ပညာရှငျ တှလေလေ့ာပွီးသားဖွဈပါတယျ။ ဟငျးခါးကို ပထမအကွိမျ ခကျြစဉျမှာ အပူခြိနျကို ကွာကွာ မပေးဘဲ ရပှေကျပှကျဆူပွီး ၁ဝ မိနဈလောကျ အကွာမှာ စားမယျဆိုရငျ အာဟာရဓာတျ အပွညျ့အဝနီးပါး ရရှိပါတယျ။
ဆကျပွီးအပူပေးထားရငျတော့ တခြို့သော အာဟာရဓာတျတှဟော အပူကွောငျ့ ပကျြစီး သှားတတျပါတယျ။ ဥပမာ- ဗီတာမငျစီ လိုမြိုးဟာ အပူပေးခြိနျကွာလလေေ ပိုပကျြစီး လဖွေဈတော့ မီးဖိုပျေါမှာအကွာကွီး အပူ မပေးသငျ့ပါဘူး။ စားလို့ရတဲ့ အတိုငျးအတာကိုသာ အပူပေးသငျ့ ပါတယျ။ နောကျပိုငျး ပွနျစားရငျလညျး ပှကျပှကျဆူတဲ့အထိ အပူပွနျ မပေးဘဲစားလို့ကောငျးရုံ ခပျနှေးနှေးသာအပူ ပေးပွီးစားရပါမယျ။
#မေး။ ။ အဲ့ဒီပါဝငျတဲ့ အာဟာရဓာတျနဲ့ ဆေးဖကျဝငျအာနိသငျတှဟော အရှကျမှာပဲ ပါတာပါလားဆရာ။ တခွားအစိတျအပိုငျး တှဖွေဈတဲ့ ဒနျ့သလှနျသီးတို့ အသီးထဲမှာပါတဲ့ အစတှေ့မှောရော ပါဝငျမှု ရှိ/မရှိ သိခငျြ ပါတယျ။
ဖွေ။ ။ ဒနျ့သလှနျတဈပငျလုံးကတော့ ဆေးဖကျဝငျတယျလို့ ပွောနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူတှစေားသုံးလရှေိ့တာကတော့ အရှကျနဲ့ အသီးသာ ဖွဈပါတယျ။ အသီးကို စားမယျဆိုရငျလညျး အာဟာရဓာတျပါဝငျမှု နဲ့ဆေးဖကျဝငျပစ်စညျးပါဝငျမှုကတော့ ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ နှဈမြိုးစလုံးစားရငျ ပိုကောငျး ပါတယျ။ ပါဝငျတဲ့ပမာဏကတော့ အနညျး အမြားရှိပါတယျ။ ဥပမာ- ဗီတာမငျစီပါဝငျမှု ကို နှိုငျးယှဉျရငျ အရှကျ ၁ဝဝ ဂရမျမှာ ဗီတာ မငျစီ ၅၁ ဒသမ ၇ဝ မီလီဂရမျပါပမေယျ့ အသီးရဲ့အနှဈမှာ ၁၄၁ မီလီဂရမျပါဝငျ ပါတယျ။ ဗီတာမငျစီက ပိုပါတယျပေါ့။
ပိုတကျစီယမျဆိုရငျ အရှကျမှာ ၃၃၇ မီလီ ဂရမျပါဝငျပွီး အသီးမှာ ၄၆၁ မီလီဂရမျ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ပရိုတငျးပါဝငျမှုကတြော့ အရှကျကပိုမြားပွနျရော။ အရှကျမှာ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုငျနှုနျးပါဝငျပွီး အစကေ့တြော့ ၂ ဒသမ ၁ ရာခိုငျနှုနျးသာပါဝငျတာ တှရေ့ပါတယျ။ တခွားအစိတျအပိုငျးတှဖွေဈတဲ့ အစတေို့၊ အမွဈတို့၊ ပငျစညျတို့ဟာလညျးဆေးဖကျဝငျ ဓာတျပစ်စညျးတှေ ပါဝငျနတောတှရေ့ပါတယျ။
#မေး။ ။ ဒနျ့သလှနျအရှကျကိုစားရငျ ရရှိနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးတှလေညျး သိပါရစဆေရာ။
ဖွေ။ ။ ဒနျ့သလှနျရှကျကို မကွာခဏ စားရငျရရှိနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူး တှကေတော့ အမြားကွီးဖွဈပါတယျ။ အရေး ပါတဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှအေနနေဲ့ကတော့-
(၁) အာဟာရခြို့တဲ့ခွငျးကနေ ကာကှယျပေးခွငျး၊
(၂) ရောဂါပိုးမြား နှိမျနငျးနိုငျခွငျး၊
(၃) ကငျဆာရောဂါမှ ကာကှယျပေးခွငျး၊
(၄) သှေးတိုးနှငျ့ နှလုံးရောဂါမြားမှ ကာကှယျပေးခွငျး၊
(၅) ဆီးခြိုသှေးခြိုရောဂါ သကျသာစခွေငျး၊
#မေး။ ။ အာဟာရခြို့တဲ့မှုကနေ ဘယျလိုမြား ကာကှယျပေးနိုငျပါသလဲဆရာ။
ဖွေ။ ။ခုနကပွောခဲ့သလိုပါပဲ။ ဒနျ့သလှနျရှကျဟာ အာဟာရဓာတျမွငျ့မားစှာပါတဲ့ အတှကျ မှနျမှနျစားခဲ့ရငျ အာဟာရဓာတျမခြို့ တဲ့အောငျ ကာကှယျပေးတဲ့နရောမှာ မြားစှာ အထောကျ အကူပွုပါတယျ။ သူ့မှာပါဝငျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှဟော ကလေးသူငယျတှနေဲ့ သကျကွီး ရှယျအိုတှေ အတှကျမြားစှာ အကြိုးရှိလှပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အခုအခါမှာ အာဟာရဓာတျ ခြို့တဲ့တဲ့နရောတှမှော ဒနျ့သလှနျပငျတှေ စိုကျပြိုးပွီး လူတှစေားသုံးဖို့ ကမျဘာ့ကနျြးမာရေး အဖှဲ့က စတငျလုပျဆောငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ၂ဝဝ၆ ခုနှဈမှာ အမရေိကနျပွညျထောငျစု မှာရှိတဲ့ Chlorogenic acidရဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ အာဖရိကမှာရှိတဲ့ အာဟာရခြို့တဲ့မှုကို တိုကျဖကျြရာမှာ ဒနျ့သလှနျရှကျဟာ အသငျ့လြျောဆုံး လို့ဆိုပါတယျ။ အပငျ ၁၈ မြိုးကို လလေ့ာရာမှာ ဒနျ့ သလှနျပငျက အကောငျးဆုံးလို့ဆိုပါတယျ။
#မေး။ ။ ရောဂါပိုးမှားတှေ နှိမျနငျးနိုငျတယျ ဆိုတော့ ဘယျလိုမြိုးရောဂါပိုးတှကေိုနှိမျနငျး ပေးနိုငျသလဲဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖွေ။ ။ ဒနျ့သလှနျရှကျ၊ ဒနျ့သလှနျစနေဲ့ အပငျရဲ့အခေါကျနဲ့ အမွဈတှရေဲ့ ပွုတျရကေိုဓာတျခှဲခနျးမှာ စမျးသပျခကျြအရ ဗကျတီး ရီးယား အတျောမြားမြားကို သစေနေိုငျတယျ ဆိုတာတှရှေိ့ရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျမှိုတခြို့နဲ့ သနျကောငျတှကေိုလညျး သစေနေိုငျကွောငျး တှရှေိ့ရပါတယျ။ အဓိကလုပျဆောငျပေးတဲ့ ဒွပျပေါငျးတှကေတော့ Isothiocyanate ၊ Glucosinolate eJY Pterygospermin တို့ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဗကျတီး ရီးယားပိုးတှေ၊ မှိုစှဲနာတှေ၊ သနျကောငျ ရောဂါတှရှေိခဲ့ရငျ ဒနျ့သလှနျ ရှကျကို ဟငျးခါး ခကျြစားခဲ့ရငျ အကြိုးရှိမှာဖွဈပါတယျ။ သိပျ လိုမှသာ Antibiotic တှသေောကျရမှာဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆီးလမျးကွောငျး ပိုးဝငျတဲ့ရောဂါအတှကျ ထိရောကျတဲ့ သဘာဝအစားအစာတဈခု ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျကလလေ့ာခကျြတှအေရ ဒနျ့ သလှနျပငျရဲ့အခေါကျကနေ ထုတျယူရရှိတဲ့ အယျကာလှိုကျ နှဈမြိုးဖွဈတဲ့ Moringine နဲ့ Moringinine တှဟောလညျးပဲ ဗကျတီး ရီးယားပိုးတှေ (both Gram-positive and Gram-negative ) နဲ့ မှိုစှဲနာတှကေို ပြောကျကငျး စနေိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
#မေး။ ။ ကငျဆာရောဂါကာကှယျနိုငျတဲ့ အစှမျးအာနိသငျကိုလညျး ရှငျးပွပေးပါဆရာ။
ဖွေ။ ။ သဘာဝသဈသီးသဈရှကျတှမှော ကငျဆာမဖွဈအောငျ ကာကှယျတားဆီးနိုငျ တဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှပေါဝငျနတေယျဆိုတာ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ သိရှိဖျောထုတျပွီးဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ဒနျ့သလှနျရှကျဟာလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။
၂ဝ၁၄ ခုနှဈမှာထုတျဝခေဲ့တဲ့ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ရဲ့ အဆို အရ ဒနျ့သလှနျရှကျမှာ ကငျဆာရောဂါ မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ Thiocarbamate ဆိုတဲ့ဓာတျပစ်စညျးနဲ့ Isothiocyanate ဆိုတဲ့ဓာတျ ပစ်စညျးတှပေါဝငျပွီး သူတို့ဟာ ကငျဆာ မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးတယျလို့ သိပ်ပံနညျးကြ လေ့ လာတှေ့ ရှိခဲ့ပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ Adenocarcinoma အမြိုးအစားကို ကာကှယျပေးတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒနျ့သလှနျပငျအမွဈကရတဲ့ အဆီအနှဈတှကေ ရငျသားကငျဆာ ကာကှယျရေးအတှကျ အထောကျအကူပွုတယျလို့ ကိုရီးယား တက်ကသိုလျ တဈခုရဲ့ လလေ့ာခကျြအရ သိရပါ တယျ။
#မေး။ ။ နှလုံးရောဂါနဲ့ သှေးတိုးရောဂါရှိသူ တှစေားရငျရော ဘယျလိုမြိုးအကြိုးရှိပါ သလဲဆရာ။
ဖွေ။ ။ ဒနျ့သလှနျရှကျ ဟာသှေးထဲမှာရှိတဲ့ အဆီပမာဏကို လြှော့ခပြေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ သှေးထဲမှာရှိတဲ့ ကိုလကျစထရောကိုခပြေး တဲ့အတှကျ နှလုံးရော ဂါ၊ သှေး တိုးရောဂါ ဝဒေနာသညျတှအေတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ သူကဆီးရှငျစတေဲ့ အာနိသငျရှိတဲ့ အတှကျ သှေးပေါငျခြိနျကစြဖေို့ အထောကျ အကူပွုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒနျ့သလှနျရှကျကို သှေးပေါငျကြ နသေူတှအေနနေဲ့ မြားမြား မစားသငျ့ပါဘူးလို့ ပညာရှငျတှကေ အကွံပွု ထားပါတယျ။ အရှကျသာမကဘဲ ဒနျ့သလှနျ ပငျရဲ့ကနျြအစိတျအပိုငျးတှဖွေဈတဲ့ အသီး၊ အစေ့၊ အခေါကျနဲ့ အမွဈတှမှောလညျး အခုလိုအာနိသငျတှေ ရှိပါတယျ။
#မေး။ ။ ဆီးခြိုသှေးခြိုကစြတေဲ့အာနိသငျ အကွောငျးလဲဆကျပွောပါဦးဆရာ။
ဖွေ။ ။ ဒါတော့သိပျမဆနျးပါဘူး။ သဘာဝ ဆေးပငျအရှကျတှေ အတျောမြားမြားဟာ ဆီးခြိုသှေးခြိုကိုထိနျးသိမျးရာမှာ မြားစှာ အထောကျ အကူပွုကွောငျး သိခဲ့တာကွာပါပွီ။ ဒီအထဲမှာ ဒနျ့သလှနျရှကျဟာလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ဒနျ့သလှနျ ရှကျမှာပါတဲ့ တာပငျးနှိုကျတှဟော ပနျကရိယမှာရှိတဲ့ အငျဆူလငျထုတျပေးတဲ့ ဘီတာ ဆဲလျတှကေို လှုံ့ဆျောနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒနျ့သလှနျ ဟငျးခါး သောကျပွီးရငျ သှေးထဲမှာရှိတဲ့ ဂလူးကို့ဈပမာဏ လြော့နညျးသှားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆီးခြိုသှေးခြိုသမားတှေ စားသုံးရငျအကြိုးရှိပါတယျ။
#မေး။ ။ တခွားအထှထှေအောနိသငျတှေ ကရော ဘာတှမြေားရှိပါသလဲဆရာ။
ဖွေ။ ။ တခွားကနျြးမာရေးအထောကျ အကူပွု အကြိုးကြေးဇူးတှလေညျး ရနိုငျပါသေးတယျ။ အဲ့ဒီထဲကအရေးကွီးတာတှကေို ပွောရရငျ-
– အရောငျကစြတေဲ့ အာနိသငျရှိတော့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးအစိတျအပိုငျးတှေ ရောငျတာကိုလြော့နညျးစပေါတယျ။
. အငျတီအောကျဆီဒငျ့အာနိသငျပေး ပါတယျ။
. အသညျးရဲ့လုပျငနျးဆောငျတာတှေ ပိုကောငျးစပေါတယျ။ အသညျးရောငျတာ၊ အသညျးခွောကျတာတှေ မဖွဈ အောငျကာကှယျ ပေးပါတယျ။
. ကြောကျကပျမှာကြောကျမတညျအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။
#မေး။ ။ ဒနျ့သလှနျရှကျမဟုတျဘဲ အသီး ကိုစားရငျရော အခုလိုအာနိသငျတှေ ရနိုငျပါ သလားဆရာ။
ဖွေ။ ။ ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့အရှကျက တော့ အစှမျးထကျဆုံးဖွဈပါတယျ။ အသီးရဲ့ အထဲမှာရှိတဲ့ အနှဈကိုပဲစားစား၊ အစကေို့ပဲ စားစား၊ ခုနကပွောခဲ့တဲ့ အာနိသငျတှရေနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရရှိနိုငျတဲ့အာနိသငျအနညျး အမြားတော့ ကှာခွားမှုရှိတာပေါ့။
#မေး။ ။ ဆရာ့အနနေဲ့ မွဝတီစာဖတျ ပရိသတျကွီးကို ဘာမြားပွောခငျြပါသေး လဲဆရာ။
ဖွေ။ ။ အိမျနောကျဖေးမှာ မွလှေတျရှိတဲ့ သူတှအေနနေဲ့ ဒနျ့သလှနျပငျကို စိုကျပြိုးကွ ပါလို့ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ ပိုးသတျဆေး၊ ဓာတျမွသွေဇာသုံးဖို့ မလိုလို့ အျောဂဲ နဈဖွဈပါတယျ။ မိသားစုဝငျငှေ တိုးစပေါတယျ။ အိမျမှာ ဟငျးခကျြစားပွီး ပိုတာရောငျးလို့ အလှယျ တကူရတော့ ၁ဝ ပငျလောကျ စိုကျထားရငျကို ဟငျးရံအတှကျ ပူစရာ မလိုတော့ ဘူးပေါ့။ အာလူးနဲ့ ရောခကျြပွီး ကလေးတှကေို ကြှေးသငျ့ပါတယျ။ ဒနျ့သလှနျသီးဟာ ကြှနျတျော တို့နိုငျငံမှာ ပေါပေါမြားမြားရရှိနိုငျပွီး ဈေးနှုနျး လညျးခြိုသာတာကွောငျ့ အသကျအရှယျ
မရှေးမကွာခဏ စားသုံးပေးသငျ့တဲ့ ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွု ဟငျးလြာတဈမြိုး ဖွဈပါတယျလို့ သတငျးကောငျး ပွောကွားပါရစေ။ ။
#CREDIT – မွဝတီ
Author admin 1Posted on January 29, 2018 Categories UncategorizedLeaveacomment on ​ဒန့်သလွန်နှင့်_ကျန်းမာရေး …….